မမလှလှ ခပျရှရှ – My Blog
မလုပျရတာ တဈပတျရှိသှားပွီလေ…..ရီလေး..ရဲ့…“ “အငျးပါ….နောကျ နှဈရကျ သုံးရကျလောကျနမှေ လုပျကှာ..နျော…ကိုကလဲ…..“ ခငျမောငျလှငျ စိတျပကျြလကျပကျြဖွငျ့ ခငျနှဲ့ရီကို သိုငျးဖကျထားသော လကျအစုံကိ ဖယျရှားရုတျသိမျးလိုကျသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ နောကျသို့လှညျ့၍ ခငျမောငျလှငျနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျလိုကျသညျ..။ “ကိုယျကလဲ…အိမျထောငျကတြာ ၁၂ နှဈပဲ ရှိနပွေီ ဥစ်စာ..သားတောငျမှ ၆ တနျး ရောကျနပွေီ…မလြှော့သေးဘူး….“ ခငျမောငျလှငျ ဘာမှ စကားပွနျမပွောမိ…။ရီလေး စီတျထဲတှငျ ခငျမောငျလှငျ့ကို ငွီးငှနေ့သညျ။“ကဲပါ…စိတျကောကျမနပေါနဲ့…နောကျ ၃ ရကျ….ဟုတျလား…ရီလေး ကတိပေးပါတယျ….ကဲ ဈေးသှားအုံးမယျ…ကိုက ဒီနေ့ အလုပျနားတော့ သားကို ကြူရှငျ သှားကွိုပေး.ဟုတျလား…“
“အငျး…….“ ခငျမောငျလှငျ မလှမျးခငျြလှမျးခငျြ ခွလှေမျးမြားဖွငျ့ ကြောခိုငျး၍ ထှကျသှားတော့မှ ခငျနှဲ့ရီက မှနျတငျခုံရှေ့ လှမျးလာပွီး အလှပွငျတော့သညျ..။ ခငျမောငျလှငျက အသကျ ၄၀ ထဲ ရောကျနပွေီ..။ ခငျနှဲ့ရီက ၃၅ နှဈ..၊ ကလေးတဈယောကျအမဆေိုပမေယျ့ မြိုးရိုးကွောငျ့လားမသိ..။ ခငျနှဲ့ရီက လုံးဝ ကမြသှား..။ သူမကိုယျကို လညျး သူမ ဂရုစိုကျသူမို့ အလှအပတှကေ အရာမယှငျး..။ လှမွဲ လှလကျြ…။ ရငျးနှီးသူမြားက အပြိုတုံးကထကျပငျ ပို၍ လှလာသညျဟု ပွောစမှတျ ပွုရသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီကို တှသေ့ော ယောကျြားတိုငျးက သူမကို ငေး၍ မဆုံး..။ အနားမှာ ယောကျြားဖွဈသူ ပါတာတောငျမှ အရေးမထားကွ..။ ခငျနှဲ့ရီကို ငမျးကွသညျ..။
ခငျနှဲ့ရီတို့နတောက တောငျဒဂုံ ရပျကှကျတှငျ ဖွဈသညျ..။ ဈေးသို့ ထှကျလာတော့ ညနေ ၅ နာရီ လောကျရှိပွီ..။ ဈေးသို့အသှား လမျးတလြောကျ၌ ယောကျြားတှကေ သူမကို စောငျး၍ တဈမြိုး ငဲ့၍ တဈဖုံ ကွညျ့ကွတော့ ခငျနှဲ့ရီ စိတျထဲ ပီတိ ဖွဈမိသညျ..။ ပြံကဈြေးလေးထိပျဖကျနားတှငျ ရှိသော လကျဘကျရညျဆိုငျသို့ ရောကျလငျြ လကျဘကျရညျကွိုကျသော ခငျနှဲ့ရီတဈယောကျ လမျးမအစပျတှငျ ရှိသော စားပှဲတှငျ ထိုငျ၍ လကျဘကျရညျသောကျသညျ..။
ဘေးမှ ခှေးခွပေျေါသို့ ဈေးခွငျးတောငျးကို တငျလိုကျသညျ..။ လကျဘကျရညျသောကျရငျး ခငျနှဲ့ရီ၏ မကျြလုံးက ဘေးဘီသို့ ကစားလိုကျမိသညျ..။ “ဟငျ“ အသံလေးကတော့ လညျခြောငျးဝတှငျ ပြောကျသှားသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ၏ မကျြနှာလေးကတော့ ပနျးနုရောငျသနျးသှားသညျ..။ ကွညျ့ပါအုံး…အသားဖွူဖွူ အရပျရှညျရှညျ ခပျခြောခြော ကောငျလေးတဈယောကျ လကျဘကျရညျဆိုငျရှနေ့ားက ကှမျးယာဆိုငျပျေါမှနေ သူမကို အငမျးမရ စူးစူးရဲရဲ စိုကျကွညျ့နသေညျ..။
ကောငျလေးက ရှိလှမှ ၁၈ ၊ ၁၉ ပေါ့..။ ဒီကောငျလေး ဘယျသူဆိုတာ ခငျနှဲ့ရီ ကောငျးကောငျးသိသညျ..။ သူမ သားရဲ့ သူငယျခငျြး၏ အဈကို ဇယြော ဆိုသောကောငျလေး ဖွဈသညျ..။ နတေို့ငျး ဒီကှမျးယာဆိုငျမှာ လာ၍ ထိုငျနတော တှရေ့သညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ ထိုငျနရောနှငျ့ ကောငျလေးထိုငျနရောက ခပျစောငျးစောငျးလေး..။ ကောငျလေး၏ မကျြလုံးတှကေ သူမရဲ့ တဈကိုယျလုံးကို လှမျးခွုံထားသညျ..။ “ဟငျ…ငါ….ဘယျလိုဖွဈတာလဲ…“ ခငျနှဲ့ရီ သူမကိုယျ သူမ အံ့သွမိသညျ..။ ကိုယျ့သားလောကျရှိသော ကောငျလေး၏ အကွညျ့ကွောငျ့ အပြိုဖွနျးလေးလို သူမ ရငျတှေ ခုနျနသေညျ..။
ဘေးရှိ ခှေးခွပေျေါတှငျ တငျထားသော ဈေးခွငျးတောငျးက သူမ၏ အောကျပိုငျးကို ကှယျထားသလို ဖွဈနသေညျ..။ ဈေုးခွငျးတောငျးကို ယူ၍ မွကွေီးပျေါသို့ ခလြိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ မသိခငျြယောငျဆောငျကာ လကျဘကျရညျကို ဇိမျခံ၍ အခြိနျဆှဲ သောကျနသေညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ ကောငျလေးဖကျသို့ ဖွတျခနဲ ကွညျ့လိုကျတော့ သူမကို စူးရဲစှာ ကွညျ့နသေော ဇယြောနှငျ့ မကျြလုံးခငျြး ဆုံမိသညျ..။ ထိုအခိုကျ ခငျနှဲ့ရီ ပွုံးပွလိုကျပွီး မကျြလှာခကြာ ရနှေေးကွမျးကို ငှဲ့၍ သောကျနလေိုကျသညျ..။ ဇယြော ထိုငျနရောမှ ထ၍ သူမဆီသို့ ဦးတညျလြှောကျလာသညျ..။
ခငျနှဲ့ရီ ၏ ရငျတှေ တဒိနျးဒိနျး ခုနျလာသညျ..။ ကောငျလေး အနားရောကျလာတော့ ခငျနှဲ့ရီ မော့ကွညျ့လိုကျသညျ..။ “လာလေ….လကျဘကျရညျသောကျအုံး…..လေ…“ “ဟငျ့အငျး…မသောကျတော့ဘူး..အနျတီ…“ `.ထိုငျလေ..“ ခငျနှဲ့ရီက သူမဘေးရှိ စောစောက ဈေးခွငျးတောငျး တငျထားသော ခှေးခွခေုံကို ထိုးပေးသညျ..။ ကောငျလေးကလဲ ခပျရဲရဲ ပငျ ဝငျ၍ ထိုငျလိုကျသညျ..။ “မငျး အမရေော နကေောငျးရဲ့ လား….၊ မတှတေ့ာတောငျ ကွာပွီ….“ “နကေောငျးတယျ..အနျတီ..အမလေဲ ညီလေးနဲ့ အလုပျရှုပျနတေယျ….“ “အငျး….လကျဘကျရညျသောကျပါလား…မှာလိုကျမယျ…“
“ဟငျ့အငျး..သောကျပွီးပွီ….အနျတီရဲ့….“ ခငျနှဲ့ရီ၏ အသံတှကေ မူမှနျမဟုတျကွောငျး သူမကိုယျ သူမ သိနသေညျ..။ ဇယြောက ခငျနှဲ့ရီ၏ တဈကိုယျလုံးကို ဘေးလူမြား မသိအောငျ ဖွတျခနဲ ကွညျ့သညျ..။ အထူးသဖွငျ့ ခငျနှဲ့ရီ၏ ဖှံ့ဖှံ့ထှားထှား ရငျသားအစုံကို အကွညျ့မြားသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ မသိခငျြယောငျ ဆောငျနသေျောလညျး ကောငျလေးနှငျ့ နီးနီးကပျကပျ ထိုငျနရေသညျဖွဈ၍ မနတေတျမထိုငျတတျ ဖွဈလာရသညျ..။ “ကဲ…အနျတီ ဈေးဝယျလိုကျအုံးမယျ….နျော…သား…“ “ဟုတျကဲ့…..သားလဲ ဟိုဖကျ ခဏလြှောကျလိုကျအုံးမယျ…“ ကောငျလေးက အရငျထ၍ ဈေးတနျးဘကျသို့ ထှကျသှားသညျ..။
ခငျနှဲ့ရီ လကျဘကျရညျဖိုးရှငျးကာ ဈေးတနျးဖကျသို့ လြှောကျလာပွီး ဈေးဝယျသညျ..။ ဝယျစရာရှိသညျမြား ဝယျခွမျးပွီးသောအခါ ခငျနှဲ့ရီ မကျြလုံးကစားကွညျ့တော့ ဇယြောဆိုသော ကောငျလေး ဈေးတဈဖကျထိပျနားတှငျ မယောကျမလညျနှငျ့ ရပျ၍ သူမကိုပဲ..ကှကျကွညျ့ကှကျကွညျ့ လုပျနသေညျကို တှလေို့ကျရသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ သကျပွငျးတဈခကျြ ခပြွီး ဈေးမှ ပွနျခဲ့လသေညျ..။ နောကျတဈနတှေ့ငျ မနကျပိုငျး တဈကွိမျ ၊ နလေ့ညျပိုငျး တှငျ တဈကွိမျ ဇယြောဆိုသော ကောငျလေး အိမျရှမှေ့ စကျဘီးနှငျ့ ဖွတျရငျး အိမျဖကျသို့ လှညျ့ လှညျ့ကွညျ့သှားသညျကို ခငျနှဲ့ရီ တှလေို့ကျရသညျ..။
ညနဈေေးထှကျတော့ ခါတိုငျးထကျပို၍ ခငျနှဲ့ရီ အလှပွငျမိသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ လကျဖကျရညျဆိုငျရောကျတော့ ဇယြောက သူမသောကျနရောစားပှဲဘေးရှိ စားပှဲတှငျ ဝငျထိုငျကာ လကျဖကျရညျ မှာသောကျသညျ..။ သူတို့နှဈယောကျ ဘေးမှ လူတှအေလဈတှငျ တဈယောကျကို တဈယောကျ မကျြလုံးခငျြးဆိုငျ ကွညျ့မိလိုကျ ပွုံး၍ ပွလိုကျကွနှငျ့ နှဈယောကျစလုံး၏ ရငျထဲတှငျတော့ တစုံတခုကို သိနသေလို ခံစားနရေလသေညျ..။
နောကျတဈနတှေ့ငျလညျး ထိုနညျးတူပငျ…။ လေးရကျမွောကျသောနတှေ့ငျတော့ ခငျနှဲ့ရီ လကျဖကျရညျဆိုငျသို့ ရောကျတော့ ဇယြော့ကို မတှရေ့..။ ခငျနှဲ့ရီ ဘေးဘီသို့ မကျြလုံးကစားရငျး ရှာကွညျ့သညျ..။ မတှရေ့…။ ဈေးတနျးဖကျသို့ လှမျး၍ ကွညျ့သညျ…။ ကောငျလေးကို မတှရေ့…။ ခငျနှဲ့ရီ နမေထိ ထိုငျမထိ ဖွဈလာရသညျ..။ ဇယြောမြား လာအုံးမလားဟု လကျဖကျရညျဆိုငျတှငျ ခါတိုငျးထကျ ပို၍ ကွာကွာလေး ထိုငျနမေိသညျ…။ မှောငျရီပြိုးလာတော့မှ ခငျနှဲ့ရီ ဈေးတနျးထဲ လြှောကျလာပွီး ဈေးဝယျသညျ..။ခငျနှဲ့ရီ စိတျထဲ အတျောပငျ မနတေတျ မထိုငျတတျ ဖွဈနသေညျ…။ ဝယျရငျးခွမျးရငျး ဈေးတနျးအလယျလောကျရောကျတော့မှ…ဟငျ….ခနဲဖွဈကာ ခငျနှဲ့ရီ ရငျထဲမှာ ဖိနျးရှိနျးသှားသညျ..။
ဇယြောက ဈေးတဈဖကျထိပျ လမျးဘေးတှငျ ဆောငျ့ကွောငျ့လေးထိုငျ၍ သူမရှိရာဖကျသို့ ငေးကွညျ့နသေညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ သတိလကျလှတျဖွဈကာ ဇယြောရှိရာသို့ ဦးတညျ၍ လြှောကျလှမျးသှားမိသညျ..။ ပွီးမှ သူမကိုယျ သူမ သတိထားမိတော့ ဇယြောရှိရာနှငျ့ မလှမျးမကမျး တဖကျဈေးထိပျနားပငျ ရောကျလို့နပွေီ…..။ ခငျနှဲ့ရီ ကိုယျရှိနျသပျ၍ ရပျလိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ သူမခပျလှမျးလှမျးသို့ တဈခကျြ လှမျးကွညျ့သညျ..။ ဓါတျမီးတိုငျ တဈတိုငျလောကျအကှာတှငျ လမျးဘေး၌ ပေါကျနသေော ကြူမွကျရုံတှေ ရှိသညျ..။ ဇယြောဘကျသို့ တဈခကျြလှမျးကွညျ့လိုကျပွနျသညျ..။ သူမကို ကွညျ့နသေော ဇယြောကို ကြူမွကျရုံတှေ ရှိရာသို့ မေးငေါ့ပွသညျ..။ ဇယြော သူ့နောကျသို့လှညျ့ကွညျ့ပွီး ခကျြခငျြး သဘောပေါကျကာ ထပွီး ကြူမွကျရုံတှေ ရှိရာသို့ လြှောကျသှားသညျ..။
ဈေးတနျးထဲတှငျ လူလဲ အတျောရှငျးနပွေီ….။ ခငျနှဲ့ရီနရောတှငျပငျ ရပျပွီး လမျးဘေးနှဈဖကျရှိ ဈေးဆိုငျမြားကို တဈဆိုငျခငျြးနီးပါး စစေ့စေ့ပျစပျ ကွညျ့သညျ..။ခငျနှဲ့ရီပုံစံက ဘာဝယျစရာ ကနျြသေးလဲဟု ရပျပွီး စဉျးစားနတေဲ့ ပုံ…။ ဈေးဆိုငျတှေ သိမျးဖို့ပွငျနကွေပွီ..။ သူမကို ဂရုစိုကျကွညျ့နသေူ တဈယောကျမှ မရှိ..။ ခငျနှဲ့ရီ သုတျခနဲ လြှောကျကာ ကြူမွကျရုံတှဆေီသို့ သှားသညျ..။ မွကျရုံတှနေား ရောကျတော့ ဇယြောက မွကျရုံတဈရုံအတှငျးနားတှငျ ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျပွီး သူမကို ကွညျ့နသေညျ..။
အနားတှငျ အိမျတှကေ ကြဲသညျ..။ သူတို့ကို မမွငျနိုငျ..။ ခငျနှဲ့ရီ ရပျလိုကျပွီး လမျးသှားလမျးလာ ရှငျးမရှငျး ခဏကွညျ့လိုကျရာ အသှားအလာ တဈယောကျမှ မရှိ..။ ခငျနှဲ့ရီ ဖွတျခနဲ ကြူမွကျရုံထဲ လှမျးဝငျကာ ဇယြော့ ရှတှေ့ငျ ဆောငျ့ကွောငျ့ ထိုငျခလြိုကျသညျ..။ ဇယြောကလညျး သှကျသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ၏ လညျပငျးကို လကျတဈဖကျဖွငျ့ လှမျး၍ ဆှဲယူဖကျလိုကျပွီး ပါးနှဈဖကျကို အငမျးမရ နမျးလိုကျသညျ..။ ဇယြောက ခငျနှဲ့ရီကို လှမျး၍ ဖကျကာ ဆှဲယူလိုကျရငျး ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျနရောမှ ဒူးထောကျလကျြသား ဖွဈသှားတော့ သူ့ပုဆိုးထဲမှ တောငျထနသေော လီးကွီးက ခငျနှဲ့ရီ၏ ပေါငျတနျကို ထိုးထောကျမိနသေညျ..။
ခငျနှဲ့ရီ တဈကိုယျလုံး အပြိုမလေးသဖှယျ ဖနျြးခနဲ ကွကျသီးတှေ ထသှားသညျ..။ ပါးနှဈဖကျကို နမျးပွီးသှားတော့ ခငျနှဲ့ရီ၏ မကျြနှာကို သူ့ပခုံးတဈဖကျ နှငျ့ မှေးထားလိုကျရာ ခငျနှဲ့ရီက ဇယြော့ ပုခုံးကို သူမနဖူးနှငျ့ မှေးတငျ၍ အောကျသို့ ငုံ့ကွညျ့လိုကျသညျ…။ ဇယြောက ကနျြလကျတဈဖကျဖွငျ့ ခငျနှဲ့ရီ၏ နို့အုံတဈဖကျကို အုပျကိုငျ၍ ဖဈြညှဈကာဆှဲသညျ..။ နဖူးမေးတငျ၍ ငုံ့ကွညျ့နသေော ခငျနှဲ့ရီသညျ ပုဆိုးထဲမှ တဆတျဆတျ တောငျထနသေော လီးကွီးကို တစိုကျမတျမတျ ကွညျ့နမေိသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ၏ နို့ကွီးတဈလုံးကို ဇယြောက ဖဈြညှဈနရေငျး ပါးတဈဖကျကိုလညျး ရှိုကျ ရှိုကျနမျးသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီတဈကိုယျလုံး ဖိနျးရှိနျး၍ တုနျခိုကျနသေညျ..။ ဇယြော အသကျရှူသံကလညျး တရှူးရှူးပွငျးထနျနသေညျ..။
“တျောပွီ..ကှာ..နျော…..“ တိုးတိုးလေးပွောပွီး…ခငျနှဲ့ရီ မတျတတျထရပျလိုကျတော့ ဇယြောက လညျး ဆတျခနဲ ထရပျလိုကျပွီး ခငျနှဲ့ရီ ကိုယျလုံးကို ဆှဲဖကျလိုကျသညျ..။ သနျလိုကျတဲ့ ကောငျလေး…။ ခငျနှဲ့ရီ အသကျရှူမရလောကျအောငျ ဖွဈသှားသညျ..။ ပွီးတော့ သူ့ဟာကွီးက ပေါငျထိပျကို ဟိုထောကျသညျထောကျနဲ့ အတျောကွီးကို သနျမာတာပဲ…။ “တျော…..ပွီ ကှယျ…….“ ဇယြော ခငျနှဲ့ရီကို လှတျပေးလိုကျသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ ဇယြော၏ မကျြနှာလေးကို ကွညျကွညျနူးနူးလေး ကွညျ့ရငျး ပါးတဈဖကျကို ရှတျခနဲ လှမျးနမျးလိုကျပွီး ကြူမွကျရုံထဲမှ လမျးပျေါသို့ လှမျး၍ တကျလိုကျသညျ..။ ဘာမြှ မကွာ..။ သုံးမိနဈမြှသာ ကွာသညျ..။ ဘေးဘီသို့ ကွညျ့လိုကျတော့ ဘယျသူမှ မရှိ..။ အကငြ်္ီလုံခညျြတှေ ဆှဲဆနျ့ရငျး လကျတဈဖကျက ဈေးခွငျးတောငျးကို ကိုငျကာ ခပျသှကျသှကျ ထှကျခဲ့သညျ..။
ခငျနှဲ့ရီနှငျ့ ဇယြောတို့ ညနတေိုငျး လမျးဘေးကြူမွကျရုံတှငျ တှနေ့ခေဲ့သညျမှာ လေးရကျခနျ့ ရှိခဲ့ခပြွေီ..။ ခငျနှဲ့ရီ အိမျသို့ ပွနျရောကျတိုငျး မနတေတျ မထိုငျတတျကွီး ဖွဈနရေပွီး စဉျးစားမိတိုငျး စောကျရညျကွညျတှကေ စိမျ့စိမျ့ထှကျလာတတျကွသညျ..။ ဒီလိုခံစားနရေတာကိုပဲ ခငျနှဲ့ရီ သာယာနှဈခွိုကျနမေိသညျ..။ “ရီလေး….ညကရြငျနျော…..“ ခငျမောငျလှငျ့ အသံကွောငျ့ ခငျနှဲ့ရီ နောကျသို့ လှညျ့ကွညျ့သညျ..။ ခငျမောငျလှငျက သူမကို နောကျမှ သိုငျးဖကျလိုကျသညျ..။ “ဘယျလိုလဲ…ဟငျ ရီလေး….“ အမြိုးမြိုး အကွောငျးပွကာ ရှောငျလှဲနရေတာ ဒီနတေ့ော့ ဘယျလိုမှ ရှောငျလို့မရတော့မှနျး ခငျနှဲ့ရီ သိလိုကျသညျ..။ ..“
“ကဲပါ…ကိုရယျ…ဖယျအုံး ညကမြှ တှတေ့ာပေါ့… ရီလေး ဈေးသှားဖို့ ပွငျလိုကျအုံးမယျ…..“ “ရီလေးကလဲကှာ….နှဈရကျစာလောကျ ဝယျပွီး ရခေဲသတ်ေတာထဲ ထညျ့ထားလိုကျပါလား… ရီလေး သှားရလာရတာ ပငျပနျးတာပေါ့….ကှယျ…“ “ဟှနျး…..သူ့မီးက လာတယျမို့လား….ကိုယျ့ယောကျြားကို လတျလတျ ဆတျဆတျ စားစခေငျြလို့ …..ဒါမှ အားရှိမှာ….ဟုတျဖူးလား…..“ “ဟဲဟဲ…..ဟုတျပါတယျ…ဟုတျပါတယျ…“ ဈေးသှားဖို့အတှကျ ခငျနှဲ့ရီ စိတျတိုငျးကြ အလှပွငျနမေိသညျ..။
ပွီးတော့ ဘရာစီယာ ဝတျမညျလုပျပွီးမှ မဝတျတော့ပဲ တီရှပျတဈထညျကို ခေါငျးမှ စှပျ၍ တဈထပျတညျး ဝတျလိုကျသညျ..။ ဝတျရငျး ခငျနှဲ့ရီ၏ မကျြနှာလေး ဘာစဉျးစားမိသညျ မသိ နီရဲသှားသညျ..။ ကလေးတဈယောကျအမဖွေဈသျောလညျး ခငျနှဲ့ရီ၏ နို့အုံထှားထှားတှကေ ပုံပကျြမသှား ၊ လြော့တိလြော့ရဲ တှဲမနေ…။ တငျးတငျးမာမာဖွငျ့ အလုံးမပကျြ လှနဆေဲ ဖွဈ၍ တဈထပျတညျး ဝတျ၍ ကွညျ့ကောငျးသညျ..။သူမဈေးသှားတော့ အခြိနျက မှောငျရိပျသနျးနပွေီ…။ ခငျနှဲ့ရီ ပွငျဆငျပွီး ဈေးခွငျးတောငျး ဆှဲ၍ ထှကျသညျ..။
အိမျပေါကျဝ ရောကျမှ စိတျထဲ မလုံသညျမို့ …. “.ကို.ရီလေး သှားပွီ……“ “အငျး…..အငျး……….“ ဈေးထှကျလာသော ခငျနှဲ့ရီ ရငျထဲတှငျ ခါတိုငျးနတှေ့လေိုပငျ ရငျတှေ တဒိနျးဒိနျး ခုနျနသေညျ..။ ထုံးစံအတိုငျး ဇယြောက ကြူမွကျရုံထဲတှငျ စောငျ့နသေညျ..။ ခငျနှဲ့ရီက သူ့ရှသေို့အရောကျ ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျခလြိုကျသညျနှငျ့ ဇယြောက လှမျးပွီး ဖကျကာ နမျးသညျ..။ ပွီးတော့ ခငျနှဲ့ရီ၏ နို့တှကေို ကိုငျဆှဲကာ ဖဈြညှဈတော့ ဘရာစီယာ ခံဝတျထားသညျနှငျ့ မတူပဲ တီရှပျတဈထပျတညျးသာ ဝတျထားသဖွငျ့ အကိုငျခံရသော ခငျနှဲ့ရီ နှငျ့ ကိုငျနသေော ဇယြောတို့မှာ အသားခငျြးထိကာ ကိုငျရသလို အရသာတှလှေ့သညျ..။ ခငျနှဲ့ရီက သူမ၏ နဖူးကို ဇယြော၏ ပခုံးပျေါ မှေးတငျ၍ အကိုငျခံနရေငျးက ဇယြော၏ ပုဆိုးထဲမှ ထောငျထနသေော လီးတနျကွီးကို လကျကလေးဖွငျ့ လှမျး၍ အသာအုပျကိုငျလိုကျသညျ..။ ဇယြော တှနျ့ခနဲ ဖွဈသှားသညျ..။ ပွီးတော့ လီးကို ပုဆိုးပျေါမှပငျ အသာကိုငျ၍ ပှတျပေးပွနျတော့ ဇယြောက သူမကို အတငျးတိုး၍ ဖကျပွီး နို့ကိုငျတာတှကေ ကွမျးလာသညျ..။
ခငျနှဲ့ရီ အရသာ တှေ ပိုတှလေ့ာသညျ..။ ဇယြော၏ ပုဆိုးခါးပုံစကို ဆှဲဖွုတျခလြိုကျတော့ လီးက ထောငျခနဲ ထှကျလာသညျ..။ ရှငျးသနျ့လှသော လူပြိုလီး…။ ဒဈပငျ မပွုတျသေး…။ အသာလေး လကျဖွငျ့ အုပျကိုငျကာ ပှတျပေးသညျ..။ ဇယြော့ လီးမှာ သူမယောကျြား ခငျမောငျလှငျ၏ လီးလောကျ မကွီး..။ အရှညျကတော့ အတူတူလောကျပငျ..။ အငျး…ခုမှ ငယျငယျလေး ရှိသေးတာပဲ …ဆကျပွီးထှားလာမှာပေါ့…ဟု တှေးကာ မေးသိုငျးကွိုးနရောကို လကျမလေးဖွငျ့ ဖှဖှလေး ဖိကာ ပှတျပေးလိုကျသညျ..။ လီးကွီးက ဆတျခနဲ ..ဆတျခနဲ ရုနျးနသေညျ..။ လီးထိပျအပေါကျလေးမှ အရညျလေးတှေ စို့ထှကျလာသညျ..။ “တျောပွီ…နျော…..မောငျ….“ ပွောလဲပွော လီးကွီးကို လကျဖွငျ့ တအားဆုပျညှဈလိုကျပွီး ခငျနှဲ့ရီ မတျတတျထရပျလိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ အဝတျအစားတှကေို ပွနျ၍ စနျ့ရငျး အပွနျလမျးသို့ လှမျးခဲ့သညျ..။
“ကို…ကလဲကှာ…အစောကွီး ရှိသေးတယျလေ….ခုမှ ရှဈနာရီလောကျပဲ ရှိသေးတာ…“ “ရီလေးကလဲ…ကှာ…သားလညျး အိပျသှားပွီပဲ…..“ အိပျယာပျေါတှငျ ပကျလကျလှနျ၍ အိပျနသေော ခငျနှဲ့ရီကို ကွုံး၍ ဖကျလိုကျသဖွငျ့ ခငျနှဲ့ရီ လနျ့သှားပွီး ပွောလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီက ညနကေ ဇယြောနှငျ့ ကိစ်စကို စားမွုံ့ပွနျနခွေငျး ဖွဈသညျ..။သူမ၏ မကျြစိထဲ ဇယြော့ လီးကွီးက မထှကျ..။ မခံ၍ မဖွဈတော့…။ သူ့ကို မွနျမွနျ ပွီးအောငျ လုပျမှပဲ…။ ငါ သူနဲ့ မပွီးခငျြဘူး..။ မိနျးမတျောတျောမြားမြား၏ အတှေးအချေါအတိုငျး ခငျနှဲ့ရီ သုံးပဈလိုကျသညျ..။ “ကဲ…ပါ….ကို…….ပကျလကျလှနျလိုကျ….“ ခငျမောငျလှငျ ပကျလကျလှနျလိုကျတော့ သူမက ပုဆိုးကို ဆှဲ၍ ခြှတျလိုကျသညျ..။ ထောငျးခနဲ ထှကျလာသော လီးကွီးက ထိပျကွီး နီရဲနသေညျ..။
ခငျနှဲ့ရီ လကျတဈဖကျက ခငျမောငျလှငျ၏ လီးကွီးကို ကိုငျ၍ ဂှငျးတိုကျပေးပွီး…ခငျမောငျလှငျ၏ နှုတျခမျးကို ဖိကပျ၍ စုပျပေးသညျ..။ ခငျမောငျလှငျ့ လကျတဈဖကျက ခငျနှဲ့ရီကို ဖကျထားပွီး လကျတဈဖကျကနို့ကို လှမျးဆှဲနယျသညျ..။ နှုတျခမျးခငျြး ခှာလိုကျတော့ ခငျမောငျလှငျ ကွုံး၍ ထသညျ..။ “ကိုယျ….ပွီးတောငျ ပွီးခငျြနပွေီ…ကှာ….“ “ရီလေးလဲ ကိုယျ့လိုပဲ……ကှယျ…“ ပွောရငျး အိပျယာပျေါသို့ ခငျနှဲ့ရီက ပကျလကျလှနျခလြိုကျသညျ..။ “ကို…ရာ မခြှတျတော့ဘူးနျော….ဒီတိုငျးပဲ…လုပျတော့..“ ခငျနှဲ့ရီက ဝတျထားသော ထဘီကို ခါးထိလှနျတငျပေးသညျ..။
သူမဝတျထားသညျက ရှပျအကငြ်္ီ လကျတိုလေး တဈထပျတညျးမို့ ရငျဘတျက အကငြ်္ီ ကယျြသီးတှေ ကို ဖွုတျပွီး နို့နှဈလုံးကို ဖျောပေးလိုကျသညျ..။ ခငျမောငျလှငျက သူမ၏ လငျဆိုတော့လဲ တာဝနျကရြေပမေညျ..။ အတေျာ့ကို စိတျထနပေုံရသော ခငျမောငျလှငျက ခငျနှဲ့ရီ၏ ပေါငျနှဈခြောငျးကို ထောငျ၍ ဒူးထောကျဝငျလိုကျပွီး လီးကို တကေ့ာ လြှောခနဲ သှငျးလိုကျသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီက စောကျခေါငျးထဲ ဝငျလာသော လီးကို စောကျပတျအတှငျးမှ ညှပျ၍ ညှဈပေးလိုကျသညျ..။ ခငျမောငျလှငျ လီးကို တဆုံးသှငျးထားရငျး ခငျနှဲ့ရီကို တဈခကျြကွညျ့ကာ.. “ရီလေးက ခလေးတဈယောကျမှေးခဲ့ပမေဲ့ ဗိုကျကွောတှေ ပွတျမနတေော့ ငါကံကောငျးတာပဲ…“ ဟုတှေးပွီး ခငျနှဲ့ရီ ကိုယျပျေါသို့ မှောကျခလြိုကျကာ နို့တဈလုံးကို ဆှဲ၍ စို့ရငျး ဖငျကွှပွီး ဆောငျ့လိုးလိုကျသညျ..။
ပထမ တဈခကျြနှဈခကျြ ခပျဖွေးဖွေး ဆောငျ့လိုကျပွီး သညျနှငျ့ မနားတမျး ဒရစပျ ဆောငျ့လိုးတော့သညျ..။ “အ….အ…..ကောငျးလိုကျတာ…ကို ရယျ….အငျး..ခဈြ…တယျ…သိပျခဈြတာပဲ…ဆောငျ့..ဆောငျ့…..အမလေး…ကိုရယျ….“ အငမျးမရပုံဖွငျ့ ညီးကာ ညှုသံလေး ပေးသညျ..။ ပါးစပျက မ သံလေး ပေးရငျး ခါးက ကော့ကော့တငျပေးကာ စောကျပတျထဲက လီးကို ညှဈညှဈပေးသညျ..။ ခငျမောငျလှငျ အသကျရှူသံတှေ ပွငျးကာ နှာမှုတျသံကွီးက တရှူးရှူး ဖွဈလာသညျ..။ အမွဲ ခံနကေမြို့ ခငျမောငျလှငျ ပွီးကာနီးပွီကို ခငျနှဲ့ရီ သိလိုကျသညျ..။ လီးတဈခြောငျးလုံးဖွငျ့ အလိုးခံနရေမှတော့ ခငျနှဲ့ရီမှာလညျး ဖီလငျတှေ နဲ့ ဆိမျ့စပွုလာသညျ..။
မကျြလုံးအစုံကို မှိတျထားပွီး သူမစောကျပတျထဲလိုးနသေော လီးက ခငျမောငျလှငျ၏ လီးဖွဈသျောလညျး သူမစိတျထဲ ညနကေတှခေဲ့သော ဇယြော ၏ လီးဟု စိတျကူးယဉျကာ နသေညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ တဈကိုယျလုံး ရှတကျလာသညျ..။ ပွီးလို့ မဖွဈသေး…။ ခငျမောငျလှငျ၏ လီးနဲ့ မပွီးခငျြတာ စိတျထဲ စှဲနသေညျ..။ သူ့ကို မွနျမွနျ ပွီးခိုငျးလိုကျမှ ဖွဈမယျ လို့ တှေးလိုကျသညျ..။ ခငျမောငျလှငျ၏ တရစပျ ဆောငျ့ခကျြတှကေ ခုတငျကွီး တဈခုလုံး တကြှိကြှိ မွညျနသေညျ..။ “လုပျ….လုပျ..ကို ……ရီလေး ပွီးတော့မယျ…..မွနျမွနျလေး…ဆောငျ့…အား….အ….အငျး…..“ အားသှနျ၍ ဆောငျ့လိုးလိုကျသော ခငျမောငျလှငျမှာ လီးကို စောကျခေါငျးထဲ တဆုံးထိုးနှဈ စိုကျသှငျးလိုကျပွီး သုတျရမြေားကို ပနျးထုတျပဈလိုကျတော့သညျ..။
ခငျမောငျလှငျက ခဏအကွာ ခငျနှဲ့ရီ၏ကိုယျပျေါမှ ဆငျးပွီး ပကျလကျလှနျခလြိုကျတော့ ခငျနှဲ့ရီက ထထိုငျပွီး ခငျမောငျလှငျကို ပုဆိုး ပွနျစှပျပေးလိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ သူမ ခါးထိလှနျထားသော ထဘီလေးကို ပွနျဆှဲခရြငျး အိပျယာပျေါ ပွနျ၍ လှဲခလြိုကျသညျ..။ လူတဈကိုယျလုံး နှမျးနယျ၍ နသေညျ..။ ၁၀ မိနဈလောကျ ကွာတော့ ခငျမောငျလှငျထံမှ ဟောကျသံက ထှကျလာသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ အိပျယာပျေါမှ အသာအယာထ၍ ခုတငျပျေါမှ ဆငျးလိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ ခုတငျ ခွရေငျးဖကျသို့ လာကာ ထဘီဟောငျးတဈထညျဖွငျ့ သူမ၏ ပေါငျကွားတှငျ ပကြေံနသေညျမြားကို သုတျသညျ..။
ထိုအခိုကျမှာပငျ လမျးဒေါငျ့ဆီမှ ဂဈတာတီးသံ ထှကျပျေါလာ၍ ခငျနှဲ့ရီ နားစှငျ့မိလိုကျသညျ.. ။ ဒီနရောတှငျ ဂဈတာတီးသံ တဈခါမှ မကွားဖူးခဲ့ပါ..။ ဂဈတာသံနောကျမှ သီခငျြးသံက ထှကျပျေါလာသညျ..။“ဟငျ…ဒါ..ဒါ..ဇယြော့ အသံပဲ…ပတျဝနျးကငျြကမြား ….အို….ဒီနားမှာ အပြိုလေးတှေ အမြားကွီး ရှိတာပဲ….“ နားစှငျ့နရေငျး လကျထဲမှ ထဘီဖွငျ့ စောကျဖုတျကို ဆကျ၍ မသုတျသေးပဲ အသာအုပျကိုငျထားသညျ..။
နားထောငျရငျး နားထောငျရငျးဖွငျ့ ဇယြော့ အသံမှနျးလဲ သိနတေော့ ခငျနှဲ့ရီ၏ စိတျတှကေ ကွှလာသညျ..။ စောစောက ခငျမောငျလှငျ လိုးသဖွငျ့ ပွီးခငျြခငျြ ဖွဈနသေော စိတျက နဲနဲ ငွိမျနရောမှ ဟုနျးခနဲ ထ၍ လာသညျ..။ လကျထဲမှ ထဘီလေးဖွငျ့ စောကျပတျကို ဖိဖိပှတျသညျ..။ အရသာတှလေ့ာတော့ မကျြလုံးအစုံကို မှိတျရငျး ဇယြော၏ အသံကို နားစှငျ့သညျ..။ မကျြလုံးထဲတှငျတော့ ညနကေ မွငျခဲ့ရသော ဇယြော့ လီးကွီးကို ပွနျမွငျယောငျနသေညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ သူမစိတျကို မထိနျးနိုငျတော့…။ မကျြလုံးဖှငျ့၍ ခုတငျပျေါ လှမျးကွညျ့လိုကျသညျ.။ ခငျမောငျလှငျက မှနျမှနျကွီး ဟောကျ၍ အိပျပြျောနသေညျ..။
လကျထဲမှ ထဘီဟောငျးလေးကို ဘေးသို့ခလြိုကျပွီး လကျတဈဖကျကို နောကျပွနျထောကျ၍ ဖငျကို ကွမျးပွငျပျေါ ထိုငျခလြိုကျသညျ..။ ပွီးမှ ပေါငျကို ကားလိုကျကာ မတရားဖောငျးတငျးလာသော စောကျပတျကွီးကို လကျဖွငျ့ အုပျကိုငျ၍ ပှတျသညျ..။ စောကျစလေ့ေးကို လကျညှိုးထိပျဖွငျ့ ကလိသညျ..။ နားက ဇယြော ၏ အသံကို အဆကျမပွတျ နားစှငျ့ ရငျး မှိတျထားသော မကျြလုံးထဲမှာ ဇယြော့ လီးကွီးကို မွငျယောငျကာ လကျညှိုးလကျခလယျ ပူး၍ စောကျခေါငျးထဲ ထိုးသှငျး၍ ထုတျခြီသှငျးခြီဖွငျ့ ခပျကွမျးကွမျး ထိုးသညျ..။
“အငျး…ဟငျး…..ဇယြောရယျ…..သား….ရယျ…..“ ခဏအတှငျး ခငျနှဲ့ရီတဈယောကျ ပွီးခငျြလာသညျ..။ လကျကို ခပျပွငျးပွငျး ခပျသှကျသှကျလေး ထိုးထဲ့၍ လိုးသညျ..။ “ဇယြော….မမ..ပွီး…တော့ မယျ….အ…..အ…အား….“ ခငျနှဲ့ရီတဈယောကျ မကျြနှာတဈခုလုံး ရှုံ့မဲ့၍ ဖငျကွီးဆတျခနဲ ဆတျခနဲ ဖွဈကာ ပွီးသှားရတော့သညျ..။ နောကျနတှေ့ငျ ခငျနှဲ့ရီသညျ မနကျပိုငျး ထဲက ဈေးသို့သှား၍ ညနပေိုငျးကတြော့ ပြံကဈြေးလေးကို မသှားတော့ပေ..။ ထို့ကွောငျ့ ဇယြောနှငျ့ မတှရေ့..။ တှခေ့ငျြသော စိတျက အဆမတနျ ရငျထဲတှငျ ဖွဈနပေမေယျ့ ဒီစိတျကို အတငျးမြိုသိပျ ခြုပျတညျးထားပွီး ခငျနှဲ့ရီသညျ ဇယြောကို ရှောငျနခေဲ့သညျ..။ ည ၉ နာရီ ထိုးပွီ..။
သားနှငျ့ လငျဖွဈသူ ခငျမောငျလှငျတို့ အိပျ၍ သှားပွီ..။ ညနကေ မသောကျတာကွာပွီဖွဈသော ခငျမောငျလှငျကို ခငျနှဲ့ရီကပငျ စကားစ၍ အရကျသောကျဖွဈအောငျ ဆှယျကာ အမွညျးကောငျးကောငျး လုပျပေးကာ အရကျတိုကျခဲ့သညျ..။ ခငျမောငျလှငျ ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ တဈရေး မနိုးနိုငျတော့…။ ခငျနှဲ့ရီ တှကျထားသညျ့အတိုငျး ည ၉ နာရီ ကြျောလငျြ ဂဈတာသံနှငျ့ ဇယြော့ သီခငျြးသံက ထှကျပျေါလာသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ အိပျယာပျေါတှငျ အသာလှဲ၍ ဇယြော၏ အသံကို နားစှငျ့ရငျး ဖီးတကျနမေိသညျ.။
ထဘီထဲ လကျထညျ့၍ စောကျဖုတျကို ပှတျသညျ..။ စောကျစလေ့ေးကို လကျညှိုးထိပျလေးနဲ့ ကလိသညျ..။ ခဏအတှငျး ခငျနှဲ့ရီ၏ စောကျဖုတျကွီးက မတရားဖောငျး၍ ခုံးထလာပွီး စောကျရညျကွညျလေးတှကေ စိုရှဲ၍ လာသညျ..။ဒီအခိုကျမှာပငျ ဂဈတာတီးပွီးသှားသော ဇယြောက လှမျး၍ အကွညျ့ဖွငျ့ ဆုံသဖွငျ့ လကျယပျလှမျးချေါလိုကျသညျ…။ ခငျနှဲ့ရီတို့ အိမျက ဒေါငျ့အိမျ ..။ အိမျရှတှေ့ငျ က ပနျးစိုကျရောငျးသောခွံရှိသညျ..။ လူနသေညျ့တဲက ဟိုတဈဖကျတှငျ တျောတျောဝေးသညျ..။ ခွရေငျးဘကျက လမျး ..။ လမျးတဈဖကျက အိမျကလညျး ဝေးသညျ..။ တဲသာသာ အိမျလေး ဖွဈ၍ ခွံစညျးရိုးပငျတှကေ တဲကိုပငျ မမွငျရ..။ ခေါငျးရငျးဘကျကအိမျက လူမနေ..။ အိမျက ပကျြစီးနပွေီ..။ ဒီနမေီ့းပကျြသော ရကျ..။ ခငျနှဲ့ရီ ညဦးထဲက ခွံစညျရိုးတံခါးကို စထေ့ားသညျ..။ ဇယြော ဂဈတာကိုငျ၍ ခွံစညျးရိုးတံခါးကို တှနျးဝငျလာသညျ..။
ခငျနှဲ့ရီ အိမျတံခါးကို ပွနျစေ့၍ အောကျသို့ ဆငျးလိုကျသညျ.။ ဇယြောက ခွံစညျးရိုးအတှငျးဖကျတှငျ ဂဈတာကို ထောငျခဲ့ပွီး ခငျနှဲ့ရီဆီ လြှောကျလာသညျ.။ နှဈယောကျသား ထိုငျခလြိုကျပွီး..ထှေးနအေောငျ ဖကျကာ နမျးကွသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီတို့ ခွံစညျးရိုးက လူတဈရပျကြျောလောကျ ရှိသော ဝါးကပျခွံစညျးရိုး ဖွဈသညျ.။ ဒီနတေ့ော့ ခငျနှဲ့ရီက ဇယြောကို အတငျးကွုံး၍ ဖကျထားမိသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီမှာ ညအိပျရနျဝတျထားသော ရှပျအကငြ်္ီလကျတိုကို ရငျဘတျ ကယျြသီးတှဖွေုတျပေးလိုကျသညျ..။ ကောငျလေးက ခကျြခငျြးပငျ မကျြနှာကို ထိုးအပျကာ နို့နှဈလုံးကို ဆှဲစို့သညျ..။
ခငျနှဲ့ရီ ရငျဘတျလေး ကော့၍ ကော့၍ ပေးပွီး နို့နှဈလုံးကို ကလေးနို့တိုကျသလို လကျဖွငျ့မကိုငျကာ တဈလုံးပွီး တဈလုံး အစို့ခံသညျ..။ စောကျရတှေကေလညျး တစိမျ့စိမျ့ ယိုစီးကနြပွေီ.။ ခငျနှဲ့ရီ အိမျပျေါသို့ တဈခကျြနားစှငျ့ကွညျ့သညျ.။ လငျဖွဈသူ ခငျမောငျလှငျ့ ဟောကျသံကသာ အဆကျမပွတျ ထှကျနသေညျ..။ ဘေးဘီသို့ မကျြလုံး ကစားကွညျ့သညျ..။ ပတျဝနျးကငျြ တဈခုလုံး မှောငျမဲ တိတျဆိတျနပွေီး ဘာလှုပျရှားမှုမှ မတှရေ့…။ “အနျတီ့ကို သိပျခဈြတာပဲ…“ “တို့လဲ ခဈြတယျ… အငျး….မမလို့ချေါတော့နျော….ခုပဲ…တို့ကို မယားဖွဈအောငျ လုပျတော့မှာမို့လား…. မမလဲ. .မောငျလေးလို့ချေါမယျ…သိလား….“ “အငျး……“ “ကဲ….လာ….“ ခငျနှဲ့ရီသညျ ဇယြောကို အိမျဘေးသို့ ချေါလာသညျ..။
အိမျဘေး မွကျနုနုလေးမြား ပေါကျနသေော နရောရောကျတော့ …. “ဖငျခပြွီး ထိုငျလိုကျ….“ “ခွထေောကျဆငျး….ဟုတျပွီ….နောကျကို တံတောငျဆဈထောကျပွီး ကိုယျကို နဲနဲ လှဲလိုကျ…ရပွီ….မောငျလေး…..“ ခငျနှဲ့ရီ ဇယြော၏ ပုဆိုးခါးပုံစကို ဆှဲဖွုတျခလြိုကျသညျ..။ ဇယြော့ လီးကွီးက မတျခနဲ ထှကျ၍လာသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ ဘေးတှငျ ဆောငျ့ကွောငျ့ ထိုငျနရောမှ ငုံ့၍ လီးကို လကျဖဝါးလေးဖွငျ့ အသာကိုငျကာ ငုံ့နမျးသညျ..။ ပွီးတော့ နီရဲရှမျးစိုနသေော သူမနှုတျခမျးလေးဖွငျ့ လီးဒဈကွီးကို ဖှဖှလေး စုပျသညျ..။ ဇယြော တှနျ့ခနဲ တှနျ့ခနဲ ဖွဈနသေညျ..။
ထို့နောကျ လြှာကို တဈလဈလေး ထုတျကာ ယကျရုံမြှ မက လုံးတဈနသေော ဂှေးဥကွီးကိုပါ ငုံ့၍ နမျးလိုကျပွီး နှုတျခမျးဖွငျ့ ငုံစုပျလိုကျ လြှာလေးဖွငျ့ ယကျပေးလိုကျ လုပျနသေညျ..။ ပွီးတော့ အမှေးလေးတှေ ခပျပါးပါး ပေါကျနသေော ဇယြော၏ ဆီးခုံကိုပါ လြှာဖွငျ့ ယကျသညျ..။ လီးထိပျတှငျ စိမျ့ထှကျလာသော အရညျကွညျလေးတှကေ လီးတနျကွီးပျေါသို့ လိမျ့၍ ဆငျးလာသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ မမှီ မကမျး ထိုအရညျကွညျလေးတှကေို လိုကျ၍ ယကျသညျ..။
ခငျနှဲ့ရီ ပေါငျခွံတဈခုလုံးလညျး စိုရှဲလို့ နပွေီ… “သိပျခဈြတာပဲ….မောငျရယျ….လုပျရအောငျနျော….မမ…မနနေိုငျတော့ဘူး…..“ တုနျခိုကျစှာ ငွီးသံလေးဖွငျ့ တဈခကျြပွောလိုကျပွီး ဇယြော၏ မကျြနှာကို ကွညျ့ကာ ပါးပွငျတဈဖကျကို ရှတျခနဲ နမျးသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ အံတဈခကျြကွိတျခါ သူမ၏ ထဘီလေးကို မ၍ ဇယြော့ပေါငျခှဆုံပျေါသို့ ခှ၍ တကျလိုကျသညျ..။ လကျတဈဖကျက တဆတျဆတျဖွဈနသေော ဇယြော၏ လီးကွီးကို အသာထိမျး၍ ဆုပျကိုငျကာ စိုရှဲနသေော သူမစောကျပတျဝတှငျ တကေ့ာ စောကျစထေိ့ပျကို လီးဒဈကွီးဖွငျ့ ပှတျလိုကျပွီးမှ အထဲသို့ဝငျအောငျ ဖိခသြှငျးယူလိုကျသညျ..။
အားရကနြေပျသှားသော ပီတိအဟုနျက ခငျနှဲ့ရီ တဈကိုယျလုံး ပြံ့နှံ့၍ သှားသညျ..။ ဇယြော၏ ဆီးခုံနှငျ့ သူမ၏ စောကျပတျဝတို့ဖိကပျ၍ လီးတဈခြောငျးလုံးကို စောကျပတျထဲ သှငျးထားပွီး ဖငျကို နှဲ့ကာ လှညျ့ပေးသညျ..။ “မမရယျ….ဟငျး…ဟငျး….“ ခငျနှဲ့ရီ ဖငျကိုကွှပွီး တဈခကျြခငျြး လိုးသညျ..။ ခငျနှဲ့ရီ၏ စောကျခေါငျးထဲတှငျ အရညျတှကေ မတရား ထှကျနသေဖွငျ့ တဘှတျဘှတျ အသံတှကေ ထှကျပျေါ၍ နသေညျ..။ ဇယြောက လကျတဈဖကျဖွငျ့ ခငျနှဲ့ရီ၏ နို့နှဈလုံးကို တဈလုံးပွီး တဈလုံး ကိုငျသညျ..။ ဖွဈညှဈသညျ..။
ရမ်မကျထနျသော မကျြလုံးအစုံဖွငျ့ ဇယြော၏ မကျြနှာခြောခြောလေးကို ကွညျ့ကာ အားပါးတရ ဆောငျ့၍လိုးသညျ..။ “မောငျရယျ…..မောငျ….ဟငျးဟငျး….အငျး…အောကျကနေ ပငျ့ပေး…..ပငျ့ပေးပါလား…မောငျ….အငျး……ဟငျး…..ကောငျးလိုကျတာ….ကှယျ…..“ ရမ်မကျတှေ ဆူဝလောတော့ ခငျနှဲ့ရီ အားမရနိုငျ ဖွဈလာရသညျ..။ ဇယြောကလညျး အောကျက ပငျ့တငျကာ ဆောငျ့ပေးသညျ..။ လူပြိုပမေဲ့ ကွညျ့ဖူးသော အခှတှေကေ မနညျးတော့..။ စောကျခေါငျးထဲတှငျ လီးကခြောငျသလို ဖွဈနပေမေယျ့ ခငျနှဲ့ရီ အတျောပငျ ကနြေပျအားရဖွဈနမေိသညျ..။ မကွာမီ ခငျနှဲ့ရီ တဈကိုယျလုံး ဆိမျ့တကျလာသညျ..။
“ကြောခပြွီး လှဲလိုကျ….“ ဇယြောထောကျထားသော တံတောငျဆဈကိုဖွုတျ၍ ကြောကို ခလြိုကျတော့ ခငျနှဲ့ရီက ဆောငျ့ကွောငျ့အနအေထားမှ ဒူးထောကျခလြိုကျပွီး ဇယြော၏ အပျေါသို့ မှောကျခကြာ ဖကျလိုကျပွီး ဖငျကွှ၍ ဆောငျ့သညျ..။ ဇယြောကလညျး မတတျတတတျနှငျ့ အောကျမှ ပငျ့ဆောငျ့ပေးသညျ..။“အား…..မောငျ…..မောငျရယျ….မမ…အား…..ပွီး ပွီ….အား…….` “အ…မမ….အငျး…….“ နှဈယောကျစလုံး ပွိုငျတူပွီးကာ အရညျမြား အိုငျထှနျးသှားသညျ..။ သူတို့နှဈယောကျကတော့ တဈယောကျကို တဈယောကျ လှတျထှကျသှားမှာ စိုးသညျ့အလား အတငျးဖကျ၍ အငမျးမရ နမျးလိုကျကွပါတော့သညျ..။
ခငျနှဲ့ရီနှငျ့ ဇယြောတို့ ညစဉျ ပုံစံမြိုးစုံ နှငျ့ တှခေဲ့ လိုးခဲ့ကွသညျမှာ ကွာခဲ့ပွီ…။ အရကျကို ကွိုကျသျောလညျး မိနျးမက တားသဖွငျ့ မသောကျပဲ နခေဲ့ရသော ခငျမောငျလှငျမှာလညျး မိနျးမက လိုလိုလားလား ရှိသဖွငျ့ နစေ့ဉျ သောကျခဲ့သညျမှာ မကျြနှာပငျ အမျးတမျးတမျး ဖွဈနခေပြွေီ..။ ပွူတငျးပေါကျ ကို မကျြနှာပေး၍ ရပျနသေော ခငျနှဲ့ရီ၏ နောကျသို့ ခငျမောငျလှငျ က တိုးကပျလိုကျပွီး သူမ၏ တငျသားအစုံကို လကျဖဝါးနှဈဖကျဖွငျ့ ကိုငျလိုကျသညျ..။
“ရီလေး တျောတျောလေး ကသြှားတယျနျော… နရေော ကောငျးရဲ့လား….“ “ကောငျးပါတယျ…ကိုရဲ့…ရီလေး အသကျလဲ ပွနျကွညျ့အုံးလေ…၊ ၃၅ ထဲ ရောကျနပွေီ…ပွီးတော့ အိမျထောငျကတြာလဲ ၁၃ နှဈထဲ ရောကျနပွေီဟာ….“ “အငျး……..“ “ပွီးတော့ ရီလေးက ဟိုကိစ်စကို သိပျပွီး စိတျမသနျလို့ ဒီလောကျ တငျနတော…ဟုတျဖူးလား….ကိုရဲ့….“ ဟုတျဖူးလား ဟု ပွီတီတီလေး လှညျ့ပွောလိုကျသော ခငျနှဲ့ရီ၏ ပါးလေး တဈဖကျအား ခငျမောငျလှငျက ရှတျခနဲ နအေောငျ နမျးလိုကျပါတော့သညျ..။ ပွီးပါပွီ….။
မလုပ်ရတာ တစ်ပတ်ရှိသွားပြီလေ…..ရီလေး..ရဲ့…“ “အင်းပါ….နောက် နှစ်ရက် သုံးရက်လောက်နေမှ လုပ်ကွာ..နော်…ကိုကလဲ…..“ ခင်မောင်လွင် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ခင်နွဲ့ရီကို သိုင်းဖက်ထားသော လက်အစုံကိ ဖယ်ရှားရုတ်သိမ်းလိုက်သည်..။ ခင်နွဲ့ရီ နောက်သို့လှည့်၍ ခင်မောင်လွင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်သည်..။ “ကိုယ်ကလဲ…အိမ်ထောင်ကျတာ ၁၂ နှစ်ပဲ ရှိနေပြီ ဥစ္စာ..သားတောင်မှ ၆ တန်း ရောက်နေပြီ…မလျှော့သေးဘူး….“ ခင်မောင်လွင် ဘာမှ စကားပြန်မပြောမိ…။ရီလေး စီတ်ထဲတွင် ခင်မောင်လွင့်ကို ငြီးငွေနေ့သည်။“ကဲပါ…စိတ်ကောက်မနေပါနဲ့…နောက် ၃ ရက်….ဟုတ်လား…ရီလေး ကတိပေးပါတယ်….ကဲ ဈေးသွားအုံးမယ်…ကိုက ဒီနေ့ အလုပ်နားတော့ သားကို ကျူရှင် သွားကြိုပေး.ဟုတ်လား…“
“အင်း…….“ ခင်မောင်လွင် မလှမ်းချင်လှမ်းချင် ခြေလှမ်းများဖြင့် ကျောခိုင်း၍ ထွက်သွားတော့မှ ခင်နွဲ့ရီက မှန်တင်ခုံရှေ့ လှမ်းလာပြီး အလှပြင်တော့သည်..။ ခင်မောင်လွင်က အသက် ၄၀ ထဲ ရောက်နေပြီ..။ ခင်နွဲ့ရီက ၃၅ နှစ်..၊ ကလေးတစ်ယောက်အမေဆိုပေမယ့် မျိုးရိုးကြောင့်လားမသိ..။ ခင်နွဲ့ရီက လုံးဝ ကျမသွား..။ သူမကိုယ်ကို လည်း သူမ ဂရုစိုက်သူမို့ အလှအပတွေက အရာမယွင်း..။ လှမြဲ လှလျက်…။ ရင်းနှီးသူများက အပျိုတုံးကထက်ပင် ပို၍ လှလာသည်ဟု ပြောစမှတ် ပြုရသည်..။ ခင်နွဲ့ရီကို တွေ့သော ယောက်ျားတိုင်းက သူမကို ငေး၍ မဆုံး..။ အနားမှာ ယောက်ျားဖြစ်သူ ပါတာတောင်မှ အရေးမထားကြ..။ ခင်နွဲ့ရီကို ငမ်းကြသည်..။
ခင်နွဲ့ရီတို့နေတာက တောင်ဒဂုံ ရပ်ကွက်တွင် ဖြစ်သည်..။ ဈေးသို့ ထွက်လာတော့ ညနေ ၅ နာရီ လောက်ရှိပြီ..။ ဈေးသို့အသွား လမ်းတလျောက်၌ ယောက်ျားတွေက သူမကို စောင်း၍ တစ်မျိုး ငဲ့၍ တစ်ဖုံ ကြည့်ကြတော့ ခင်နွဲ့ရီ စိတ်ထဲ ပီတိ ဖြစ်မိသည်..။ ပျံကျဈေးလေးထိပ်ဖက်နားတွင် ရှိသော လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သို့ ရောက်လျင် လက်ဘက်ရည်ကြိုက်သော ခင်နွဲ့ရီတစ်ယောက် လမ်းမအစပ်တွင် ရှိသော စားပွဲတွင် ထိုင်၍ လက်ဘက်ရည်သောက်သည်..။
ဘေးမှ ခွေးခြေပေါ်သို့ ဈေးခြင်းတောင်းကို တင်လိုက်သည်..။ လက်ဘက်ရည်သောက်ရင်း ခင်နွဲ့ရီ၏ မျက်လုံးက ဘေးဘီသို့ ကစားလိုက်မိသည်..။ “ဟင်“ အသံလေးကတော့ လည်ချောင်းဝတွင် ပျောက်သွားသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ၏ မျက်နှာလေးကတော့ ပန်းနုရောင်သန်းသွားသည်..။ ကြည့်ပါအုံး…အသားဖြူဖြူ အရပ်ရှည်ရှည် ခပ်ချောချော ကောင်လေးတစ်ယောက် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ရှေ့နားက ကွမ်းယာဆိုင်ပေါ်မှနေ သူမကို အငမ်းမရ စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကြည့်နေသည်..။
ကောင်လေးက ရှိလှမှ ၁၈ ၊ ၁၉ ပေါ့..။ ဒီကောင်လေး ဘယ်သူဆိုတာ ခင်နွဲ့ရီ ကောင်းကောင်းသိသည်..။ သူမ သားရဲ့ သူငယ်ချင်း၏ အစ်ကို ဇေယျာ ဆိုသောကောင်လေး ဖြစ်သည်..။ နေ့တိုင်း ဒီကွမ်းယာဆိုင်မှာ လာ၍ ထိုင်နေတာ တွေ့ရသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ ထိုင်နေရာနှင့် ကောင်လေးထိုင်နေရာက ခပ်စောင်းစောင်းလေး..။ ကောင်လေး၏ မျက်လုံးတွေက သူမရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို လွမ်းခြုံထားသည်..။ “ဟင်…ငါ….ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ…“ ခင်နွဲ့ရီ သူမကိုယ် သူမ အံ့သြမိသည်..။ ကိုယ့်သားလောက်ရှိသော ကောင်လေး၏ အကြည့်ကြောင့် အပျိုဖြန်းလေးလို သူမ ရင်တွေ ခုန်နေသည်..။
ဘေးရှိ ခွေးခြေပေါ်တွင် တင်ထားသော ဈေးခြင်းတောင်းက သူမ၏ အောက်ပိုင်းကို ကွယ်ထားသလို ဖြစ်နေသည်..။ ဈေုးခြင်းတောင်းကို ယူ၍ မြေကြီးပေါ်သို့ ချလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ လက်ဘက်ရည်ကို ဇိမ်ခံ၍ အချိန်ဆွဲ သောက်နေသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ ကောင်လေးဖက်သို့ ဖြတ်ခနဲ ကြည့်လိုက်တော့ သူမကို စူးရဲစွာ ကြည့်နေသော ဇေယျာနှင့် မျက်လုံးချင်း ဆုံမိသည်..။ ထိုအခိုက် ခင်နွဲ့ရီ ပြုံးပြလိုက်ပြီး မျက်လွာချကာ ရေနွေးကြမ်းကို ငှဲ့၍ သောက်နေလိုက်သည်..။ ဇေယျာ ထိုင်နေရာမှ ထ၍ သူမဆီသို့ ဦးတည်လျှောက်လာသည်..။
ခင်နွဲ့ရီ ၏ ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုန်လာသည်..။ ကောင်လေး အနားရောက်လာတော့ ခင်နွဲ့ရီ မော့ကြည့်လိုက်သည်..။ “လာလေ….လက်ဘက်ရည်သောက်အုံး…..လေ…“ “ဟင့်အင်း…မသောက်တော့ဘူး..အန်တီ…“ `.ထိုင်လေ..“ ခင်နွဲ့ရီက သူမဘေးရှိ စောစောက ဈေးခြင်းတောင်း တင်ထားသော ခွေးခြေခုံကို ထိုးပေးသည်..။ ကောင်လေးကလဲ ခပ်ရဲရဲ ပင် ဝင်၍ ထိုင်လိုက်သည်..။ “မင်း အမေရော နေကောင်းရဲ့ လား….၊ မတွေ့တာတောင် ကြာပြီ….“ “နေကောင်းတယ်..အန်တီ..အမေလဲ ညီလေးနဲ့ အလုပ်ရွုပ်နေတယ်….“ “အင်း….လက်ဘက်ရည်သောက်ပါလား…မှာလိုက်မယ်…“
“ဟင့်အင်း..သောက်ပြီးပြီ….အန်တီရဲ့….“ ခင်နွဲ့ရီ၏ အသံတွေက မူမှန်မဟုတ်ကြောင်း သူမကိုယ် သူမ သိနေသည်..။ ဇေယျာက ခင်နွဲ့ရီ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဘေးလူများ မသိအောင် ဖြတ်ခနဲ ကြည့်သည်..။ အထူးသဖြင့် ခင်နွဲ့ရီ၏ ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွား ရင်သားအစုံကို အကြည့်များသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေသော်လည်း ကောင်လေးနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ထိုင်နေရသည်ဖြစ်၍ မနေတတ်မထိုင်တတ် ဖြစ်လာရသည်..။ “ကဲ…အန်တီ ဈေးဝယ်လိုက်အုံးမယ်….နော်…သား…“ “ဟုတ်ကဲ့…..သားလဲ ဟိုဖက် ခဏလျှောက်လိုက်အုံးမယ်…“ ကောင်လေးက အရင်ထ၍ ဈေးတန်းဘက်သို့ ထွက်သွားသည်..။
ခင်နွဲ့ရီ လက်ဘက်ရည်ဖိုးရှင်းကာ ဈေးတန်းဖက်သို့ လျှောက်လာပြီး ဈေးဝယ်သည်..။ ဝယ်စရာရှိသည်များ ဝယ်ခြမ်းပြီးသောအခါ ခင်နွဲ့ရီ မျက်လုံးကစားကြည့်တော့ ဇေယျာဆိုသော ကောင်လေး ဈေးတစ်ဖက်ထိပ်နားတွင် မယောက်မလည်နှင့် ရပ်၍ သူမကိုပဲ..ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ သက်ပြင်းတစ်ချက် ချပြီး ဈေးမှ ပြန်ခဲ့လေသည်..။ နောက်တစ်နေ့တွင် မနက်ပိုင်း တစ်ကြိမ် ၊ နေ့လည်ပိုင်း တွင် တစ်ကြိမ် ဇေယျာဆိုသော ကောင်လေး အိမ်ရှေ့မှ စက်ဘီးနှင့် ဖြတ်ရင်း အိမ်ဖက်သို့ လှည့် လှည့်ကြည့်သွားသည်ကို ခင်နွဲ့ရီ တွေ့လိုက်ရသည်..။
ညနေဈေးထွက်တော့ ခါတိုင်းထက်ပို၍ ခင်နွဲ့ရီ အလှပြင်မိသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်တော့ ဇေယျာက သူမသောက်နေရာစားပွဲဘေးရှိ စားပွဲတွင် ဝင်ထိုင်ကာ လက်ဖက်ရည် မှာသောက်သည်..။ သူတို့နှစ်ယောက် ဘေးမှ လူတွေအလစ်တွင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မျက်လုံးချင်းဆိုင် ကြည့်မိလိုက် ပြုံး၍ ပြလိုက်ကြနှင့် နှစ်ယောက်စလုံး၏ ရင်ထဲတွင်တော့ တစုံတခုကို သိနေသလို ခံစားနေရလေသည်..။
နောက်တစ်နေ့တွင်လည်း ထိုနည်းတူပင်…။ လေးရက်မြောက်သောနေ့တွင်တော့ ခင်နွဲ့ရီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ရောက်တော့ ဇေယျာ့ကို မတွေ့ရ..။ ခင်နွဲ့ရီ ဘေးဘီသို့ မျက်လုံးကစားရင်း ရှာကြည့်သည်..။ မတွေ့ရ…။ ဈေးတန်းဖက်သို့ လှမ်း၍ ကြည့်သည်…။ ကောင်လေးကို မတွေ့ရ…။ ခင်နွဲ့ရီ နေမထိ ထိုင်မထိ ဖြစ်လာရသည်..။ ဇေယျာများ လာအုံးမလားဟု လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ခါတိုင်းထက် ပို၍ ကြာကြာလေး ထိုင်နေမိသည်…။ မှောင်ရီပျိုးလာတော့မှ ခင်နွဲ့ရီ ဈေးတန်းထဲ လျှောက်လာပြီး ဈေးဝယ်သည်..။ခင်နွဲ့ရီ စိတ်ထဲ အတော်ပင် မနေတတ် မထိုင်တတ် ဖြစ်နေသည်…။ ဝယ်ရင်းခြမ်းရင်း ဈေးတန်းအလယ်လောက်ရောက်တော့မှ…ဟင်….ခနဲဖြစ်ကာ ခင်နွဲ့ရီ ရင်ထဲမှာ ဖိန်းရှိန်းသွားသည်..။
ဇေယျာက ဈေးတစ်ဖက်ထိပ် လမ်းဘေးတွင် ဆောင့်ကြောင့်လေးထိုင်၍ သူမရှိရာဖက်သို့ ငေးကြည့်နေသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကာ ဇေယျာရှိရာသို့ ဦးတည်၍ လျှောက်လှမ်းသွားမိသည်..။ ပြီးမှ သူမကိုယ် သူမ သတိထားမိတော့ ဇေယျာရှိရာနှင့် မလှမ်းမကမ်း တဖက်ဈေးထိပ်နားပင် ရောက်လို့နေပြီ…..။ ခင်နွဲ့ရီ ကိုယ်ရှိန်သပ်၍ ရပ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ သူမခပ်လှမ်းလှမ်းသို့ တစ်ချက် လှမ်းကြည့်သည်..။ ဓါတ်မီးတိုင် တစ်တိုင်လောက်အကွာတွင် လမ်းဘေး၌ ပေါက်နေသော ကျူမြက်ရုံတွေ ရှိသည်..။ ဇေယျာဘက်သို့ တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်သည်..။ သူမကို ကြည့်နေသော ဇေယျာကို ကျူမြက်ရုံတွေ ရှိရာသို့ မေးငေါ့ပြသည်..။ ဇေယျာ သူ့နောက်သို့လှည့်ကြည့်ပြီး ချက်ချင်း သဘောပေါက်ကာ ထပြီး ကျူမြက်ရုံတွေ ရှိရာသို့ လျှောက်သွားသည်..။
ဈေးတန်းထဲတွင် လူလဲ အတော်ရှင်းနေပြီ….။ ခင်နွဲ့ရီနေရာတွင်ပင် ရပ်ပြီး လမ်းဘေးနှစ်ဖက်ရှိ ဈေးဆိုင်များကို တစ်ဆိုင်ချင်းနီးပါး စေ့စေ့စပ်စပ် ကြည့်သည်..။ခင်နွဲ့ရီပုံစံက ဘာဝယ်စရာ ကျန်သေးလဲဟု ရပ်ပြီး စဉ်းစားနေတဲ့ ပုံ…။ ဈေးဆိုင်တွေ သိမ်းဖို့ပြင်နေကြပြီ..။ သူမကို ဂရုစိုက်ကြည့်နေသူ တစ်ယောက်မှ မရှိ..။ ခင်နွဲ့ရီ သုတ်ခနဲ လျှောက်ကာ ကျူမြက်ရုံတွေဆီသို့ သွားသည်..။ မြက်ရုံတွေနား ရောက်တော့ ဇေယျာက မြက်ရုံတစ်ရုံအတွင်းနားတွင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး သူမကို ကြည့်နေသည်..။
အနားတွင် အိမ်တွေက ကျဲသည်..။ သူတို့ကို မမြင်နိုင်..။ ခင်နွဲ့ရီ ရပ်လိုက်ပြီး လမ်းသွားလမ်းလာ ရှင်းမရှင်း ခဏကြည့်လိုက်ရာ အသွားအလာ တစ်ယောက်မှ မရှိ..။ ခင်နွဲ့ရီ ဖြတ်ခနဲ ကျူမြက်ရုံထဲ လှမ်းဝင်ကာ ဇေယျာ့ ရှေ့တွင် ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ချလိုက်သည်..။ ဇေယျာကလည်း သွက်သည်..။ ခင်နွဲ့ရီ၏ လည်ပင်းကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်း၍ ဆွဲယူဖက်လိုက်ပြီး ပါးနှစ်ဖက်ကို အငမ်းမရ နမ်းလိုက်သည်..။ ဇေယျာက ခင်နွဲ့ရီကို လှမ်း၍ ဖက်ကာ ဆွဲယူလိုက်ရင်း ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရာမှ ဒူးထောက်လျက်သား ဖြစ်သွားတော့ သူ့ပုဆိုးထဲမှ တောင်ထနေသော လီးကြီးက ခင်နွဲ့ရီ၏ ပေါင်တန်ကို ထိုးထောက်မိနေသည်..။
ခင်နွဲ့ရီ တစ်ကိုယ်လုံး အပျိုမလေးသဖွယ် ဖျန်းခနဲ ကြက်သီးတွေ ထသွားသည်..။ ပါးနှစ်ဖက်ကို နမ်းပြီးသွားတော့ ခင်နွဲ့ရီ၏ မျက်နှာကို သူ့ပခုံးတစ်ဖက် နှင့် မှေးထားလိုက်ရာ ခင်နွဲ့ရီက ဇေယျာ့ ပုခုံးကို သူမနဖူးနှင့် မှေးတင်၍ အောက်သို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်…။ ဇေယျာက ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ခင်နွဲ့ရီ၏ နို့အုံတစ်ဖက်ကို အုပ်ကိုင်၍ ဖျစ်ညှစ်ကာဆွဲသည်..။ နဖူးမေးတင်၍ ငုံ့ကြည့်နေသော ခင်နွဲ့ရီသည် ပုဆိုးထဲမှ တဆတ်ဆတ် တောင်ထနေသော လီးကြီးကို တစိုက်မတ်မတ် ကြည့်နေမိသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ၏ နို့ကြီးတစ်လုံးကို ဇေယျာက ဖျစ်ညှစ်နေရင်း ပါးတစ်ဖက်ကိုလည်း ရှိုက် ရှိုက်နမ်းသည်..။ ခင်နွဲ့ရီတစ်ကိုယ်လုံး ဖိန်းရှိန်း၍ တုန်ခိုက်နေသည်..။ ဇေယျာ အသက်ရွူသံကလည်း တရွူးရွူးပြင်းထန်နေသည်..။
“တော်ပြီ..ကွာ..နော်…..“ တိုးတိုးလေးပြောပြီး…ခင်နွဲ့ရီ မတ်တတ်ထရပ်လိုက်တော့ ဇေယျာက လည်း ဆတ်ခနဲ ထရပ်လိုက်ပြီး ခင်နွဲ့ရီ ကိုယ်လုံးကို ဆွဲဖက်လိုက်သည်..။ သန်လိုက်တဲ့ ကောင်လေး…။ ခင်နွဲ့ရီ အသက်ရွူမရလောက်အောင် ဖြစ်သွားသည်..။ ပြီးတော့ သူ့ဟာကြီးက ပေါင်ထိပ်ကို ဟိုထောက်သည်ထောက်နဲ့ အတော်ကြီးကို သန်မာတာပဲ…။ “တော်…..ပြီ ကွယ်…….“ ဇေယျာ ခင်နွဲ့ရီကို လွတ်ပေးလိုက်သည်..။ ခင်နွဲ့ရီ ဇေယျာ၏ မျက်နှာလေးကို ကြည်ကြည်နူးနူးလေး ကြည့်ရင်း ပါးတစ်ဖက်ကို ရွတ်ခနဲ လှမ်းနမ်းလိုက်ပြီး ကျူမြက်ရုံထဲမှ လမ်းပေါ်သို့ လှမ်း၍ တက်လိုက်သည်..။ ဘာမျှ မကြာ..။ သုံးမိနစ်မျှသာ ကြာသည်..။ ဘေးဘီသို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်သူမှ မရှိ..။ အင်္ကျီလုံချည်တွေ ဆွဲဆန့်ရင်း လက်တစ်ဖက်က ဈေးခြင်းတောင်းကို ကိုင်ကာ ခပ်သွက်သွက် ထွက်ခဲ့သည်..။
ခင်နွဲ့ရီနှင့် ဇေယျာတို့ ညနေတိုင်း လမ်းဘေးကျူမြက်ရုံတွင် တွေ့နေခဲ့သည်မှာ လေးရက်ခန့် ရှိခဲ့ချေပြီ..။ ခင်နွဲ့ရီ အိမ်သို့ ပြန်ရောက်တိုင်း မနေတတ် မထိုင်တတ်ကြီး ဖြစ်နေရပြီး စဉ်းစားမိတိုင်း စောက်ရည်ကြည်တွေက စိမ့်စိမ့်ထွက်လာတတ်ကြသည်..။ ဒီလိုခံစားနေရတာကိုပဲ ခင်နွဲ့ရီ သာယာနှစ်ခြိုက်နေမိသည်..။ “ရီလေး….ညကျရင်နော်…..“ ခင်မောင်လွင့် အသံကြောင့် ခင်နွဲ့ရီ နောက်သို့ လှည့်ကြည့်သည်..။ ခင်မောင်လွင်က သူမကို နောက်မှ သိုင်းဖက်လိုက်သည်..။ “ဘယ်လိုလဲ…ဟင် ရီလေး….“ အမျိုးမျိုး အကြောင်းပြကာ ရှောင်လွဲနေရတာ ဒီနေ့တော့ ဘယ်လိုမှ ရှောင်လို့မရတော့မှန်း ခင်နွဲ့ရီ သိလိုက်သည်..။ ..“
“ကဲပါ…ကိုရယ်…ဖယ်အုံး ညကျမှ တွေ့တာပေါ့… ရီလေး ဈေးသွားဖို့ ပြင်လိုက်အုံးမယ်…..“ “ရီလေးကလဲကွာ….နှစ်ရက်စာလောက် ဝယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါလား… ရီလေး သွားရလာရတာ ပင်ပန်းတာပေါ့….ကွယ်…“ “ဟွန်း…..သူ့မီးက လာတယ်မို့လား….ကိုယ့်ယောက်ျားကို လတ်လတ် ဆတ်ဆတ် စားစေချင်လို့ …..ဒါမှ အားရှိမှာ….ဟုတ်ဖူးလား…..“ “ဟဲဟဲ…..ဟုတ်ပါတယ်…ဟုတ်ပါတယ်…“ ဈေးသွားဖို့အတွက် ခင်နွဲ့ရီ စိတ်တိုင်းကျ အလှပြင်နေမိသည်..။
ပြီးတော့ ဘရာစီယာ ဝတ်မည်လုပ်ပြီးမှ မဝတ်တော့ပဲ တီရှပ်တစ်ထည်ကို ခေါင်းမှ စွပ်၍ တစ်ထပ်တည်း ဝတ်လိုက်သည်..။ ဝတ်ရင်း ခင်နွဲ့ရီ၏ မျက်နှာလေး ဘာစဉ်းစားမိသည် မသိ နီရဲသွားသည်..။ ကလေးတစ်ယောက်အမေဖြစ်သော်လည်း ခင်နွဲ့ရီ၏ နို့အုံထွားထွားတွေက ပုံပျက်မသွား ၊ လျော့တိလျော့ရဲ တွဲမနေ…။ တင်းတင်းမာမာဖြင့် အလုံးမပျက် လှနေဆဲ ဖြစ်၍ တစ်ထပ်တည်း ဝတ်၍ ကြည့်ကောင်းသည်..။သူမဈေးသွားတော့ အချိန်က မှောင်ရိပ်သန်းနေပြီ…။ ခင်နွဲ့ရီ ပြင်ဆင်ပြီး ဈေးခြင်းတောင်း ဆွဲ၍ ထွက်သည်..။
အိမ်ပေါက်ဝ ရောက်မှ စိတ်ထဲ မလုံသည်မို့ …. “.ကို.ရီလေး သွားပြီ……“ “အင်း…..အင်း……….“ ဈေးထွက်လာသော ခင်နွဲ့ရီ ရင်ထဲတွင် ခါတိုင်းနေ့တွေလိုပင် ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်း ခုန်နေသည်..။ ထုံးစံအတိုင်း ဇေယျာက ကျူမြက်ရုံထဲတွင် စောင့်နေသည်..။ ခင်နွဲ့ရီက သူ့ရှေ့သို့အရောက် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချလိုက်သည်နှင့် ဇေယျာက လှမ်းပြီး ဖက်ကာ နမ်းသည်..။ ပြီးတော့ ခင်နွဲ့ရီ၏ နို့တွေကို ကိုင်ဆွဲကာ ဖျစ်ညှစ်တော့ ဘရာစီယာ ခံဝတ်ထားသည်နှင့် မတူပဲ တီရှပ်တစ်ထပ်တည်းသာ ဝတ်ထားသဖြင့် အကိုင်ခံရသော ခင်နွဲ့ရီ နှင့် ကိုင်နေသော ဇေယျာတို့မှာ အသားချင်းထိကာ ကိုင်ရသလို အရသာတွေ့လှသည်..။ ခင်နွဲ့ရီက သူမ၏ နဖူးကို ဇေယျာ၏ ပခုံးပေါ် မှေးတင်၍ အကိုင်ခံနေရင်းက ဇေယျာ၏ ပုဆိုးထဲမှ ထောင်ထနေသော လီးတန်ကြီးကို လက်ကလေးဖြင့် လှမ်း၍ အသာအုပ်ကိုင်လိုက်သည်..။ ဇေယျာ တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်..။ ပြီးတော့ လီးကို ပုဆိုးပေါ်မှပင် အသာကိုင်၍ ပွတ်ပေးပြန်တော့ ဇေယျာက သူမကို အတင်းတိုး၍ ဖက်ပြီး နို့ကိုင်တာတွေက ကြမ်းလာသည်..။
ခင်နွဲ့ရီ အရသာ တွေ ပိုတွေ့လာသည်..။ ဇေယျာ၏ ပုဆိုးခါးပုံစကို ဆွဲဖြုတ်ချလိုက်တော့ လီးက ထောင်ခနဲ ထွက်လာသည်..။ ရှင်းသန့်လှသော လူပျိုလီး…။ ဒစ်ပင် မပြုတ်သေး…။ အသာလေး လက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်ကာ ပွတ်ပေးသည်..။ ဇေယျာ့ လီးမှာ သူမယောက်ျား ခင်မောင်လွင်၏ လီးလောက် မကြီး..။ အရှည်ကတော့ အတူတူလောက်ပင်..။ အင်း…ခုမှ ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတာပဲ …ဆက်ပြီးထွားလာမှာပေါ့…ဟု တွေးကာ မေးသိုင်းကြိုးနေရာကို လက်မလေးဖြင့် ဖွဖွလေး ဖိကာ ပွတ်ပေးလိုက်သည်..။ လီးကြီးက ဆတ်ခနဲ ..ဆတ်ခနဲ ရုန်းနေသည်..။ လီးထိပ်အပေါက်လေးမှ အရည်လေးတွေ စို့ထွက်လာသည်..။ “တော်ပြီ…နော်…..မောင်….“ ပြောလဲပြော လီးကြီးကို လက်ဖြင့် တအားဆုပ်ညှစ်လိုက်ပြီး ခင်နွဲ့ရီ မတ်တတ်ထရပ်လိုက်သည်..။ ပြီးတော့ အဝတ်အစားတွေကို ပြန်၍ စန့်ရင်း အပြန်လမ်းသို့ လှမ်းခဲ့သည်..။
“ကို…ကလဲကွာ…အစောကြီး ရှိသေးတယ်လေ….ခုမှ ရှစ်နာရီလောက်ပဲ ရှိသေးတာ…“ “ရီလေးကလဲ…ကွာ…သားလည်း အိပ်သွားပြီပဲ…..“ အိပ်ယာပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်၍ အိပ်နေသော ခင်နွဲ့ရီကို ကြုံး၍ ဖက်လိုက်သဖြင့် ခင်နွဲ့ရီ လန့်သွားပြီး ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်..။ ခင်နွဲ့ရီက ညနေက ဇေယျာနှင့် ကိစ္စကို စားမြုံ့ပြန်နေခြင်း ဖြစ်သည်..။သူမ၏ မျက်စိထဲ ဇေယျာ့ လီးကြီးက မထွက်..။ မခံ၍ မဖြစ်တော့…။ သူ့ကို မြန်မြန် ပြီးအောင် လုပ်မှပဲ…။ ငါ သူနဲ့ မပြီးချင်ဘူး..။ မိန်းမတော်တော်များများ၏ အတွေးအခေါ်အတိုင်း ခင်နွဲ့ရီ သုံးပစ်လိုက်သည်..။ “ကဲ…ပါ….ကို…….ပက်လက်လှန်လိုက်….“ ခင်မောင်လွင် ပက်လက်လှန်လိုက်တော့ သူမက ပုဆိုးကို ဆွဲ၍ ချွတ်လိုက်သည်..။ ထောင်းခနဲ ထွက်လာသော လီးကြီးက ထိပ်ကြီး နီရဲနေသည်..။
ခင်နွဲ့ရီ လက်တစ်ဖက်က ခင်မောင်လွင်၏ လီးကြီးကို ကိုင်၍ ဂွင်းတိုက်ပေးပြီး…ခင်မောင်လွင်၏ နွုတ်ခမ်းကို ဖိကပ်၍ စုပ်ပေးသည်..။ ခင်မောင်လွင့် လက်တစ်ဖက်က ခင်နွဲ့ရီကို ဖက်ထားပြီး လက်တစ်ဖက်ကနို့ကို လှမ်းဆွဲနယ်သည်..။ နွုတ်ခမ်းချင်း ခွာလိုက်တော့ ခင်မောင်လွင် ကြုံး၍ ထသည်..။ “ကိုယ်….ပြီးတောင် ပြီးချင်နေပြီ…ကွာ….“ “ရီလေးလဲ ကိုယ့်လိုပဲ……ကွယ်…“ ပြောရင်း အိပ်ယာပေါ်သို့ ခင်နွဲ့ရီက ပက်လက်လှန်ချလိုက်သည်..။ “ကို…ရာ မချွတ်တော့ဘူးနော်….ဒီတိုင်းပဲ…လုပ်တော့..“ ခင်နွဲ့ရီက ဝတ်ထားသော ထဘီကို ခါးထိလှန်တင်ပေးသည်..။
သူမဝတ်ထားသည်က ရှပ်အင်္ကျီ လက်တိုလေး တစ်ထပ်တည်းမို့ ရင်ဘတ်က အင်္ကျီ ကျယ်သီးတွေ ကို ဖြုတ်ပြီး နို့နှစ်လုံးကို ဖော်ပေးလိုက်သည်..။ ခင်မောင်လွင်က သူမ၏ လင်ဆိုတော့လဲ တာဝန်ကျေရပေမည်..။ အတော့်ကို စိတ်ထနေပုံရသော ခင်မောင်လွင်က ခင်နွဲ့ရီ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ထောင်၍ ဒူးထောက်ဝင်လိုက်ပြီး လီးကို တေ့ကာ လျှောခနဲ သွင်းလိုက်သည်..။ ခင်နွဲ့ရီက စောက်ခေါင်းထဲ ဝင်လာသော လီးကို စောက်ပတ်အတွင်းမှ ညှပ်၍ ညှစ်ပေးလိုက်သည်..။ ခင်မောင်လွင် လီးကို တဆုံးသွင်းထားရင်း ခင်နွဲ့ရီကို တစ်ချက်ကြည့်ကာ.. “ရီလေးက ခလေးတစ်ယောက်မွေးခဲ့ပေမဲ့ ဗိုက်ကြောတွေ ပြတ်မနေတော့ ငါကံကောင်းတာပဲ…“ ဟုတွေးပြီး ခင်နွဲ့ရီ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ကာ နို့တစ်လုံးကို ဆွဲ၍ စို့ရင်း ဖင်ကြွပြီး ဆောင့်လိုးလိုက်သည်..။
ပထမ တစ်ချက်နှစ်ချက် ခပ်ဖြေးဖြေး ဆောင့်လိုက်ပြီး သည်နှင့် မနားတမ်း ဒရစပ် ဆောင့်လိုးတော့သည်..။ “အ….အ…..ကောင်းလိုက်တာ…ကို ရယ်….အင်း..ချစ်…တယ်…သိပ်ချစ်တာပဲ…ဆောင့်..ဆောင့်…..အမလေး…ကိုရယ်….“ အငမ်းမရပုံဖြင့် ညီးကာ ညွုသံလေး ပေးသည်..။ ပါးစပ်က မ သံလေး ပေးရင်း ခါးက ကော့ကော့တင်ပေးကာ စောက်ပတ်ထဲက လီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးသည်..။ ခင်မောင်လွင် အသက်ရွူသံတွေ ပြင်းကာ နှာမွုတ်သံကြီးက တရွူးရွူး ဖြစ်လာသည်..။ အမြဲ ခံနေကျမို့ ခင်မောင်လွင် ပြီးကာနီးပြီကို ခင်နွဲ့ရီ သိလိုက်သည်..။ လီးတစ်ချောင်းလုံးဖြင့် အလိုးခံနေရမှတော့ ခင်နွဲ့ရီမှာလည်း ဖီလင်တွေ နဲ့ ဆိမ့်စပြုလာသည်..။
မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ထားပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲလိုးနေသော လီးက ခင်မောင်လွင်၏ လီးဖြစ်သော်လည်း သူမစိတ်ထဲ ညနေကတွေ့ခဲ့သော ဇေယျာ ၏ လီးဟု စိတ်ကူးယဉ်ကာ နေသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ တစ်ကိုယ်လုံး ရွတက်လာသည်..။ ပြီးလို့ မဖြစ်သေး…။ ခင်မောင်လွင်၏ လီးနဲ့ မပြီးချင်တာ စိတ်ထဲ စွဲနေသည်..။ သူ့ကို မြန်မြန် ပြီးခိုင်းလိုက်မှ ဖြစ်မယ် လို့ တွေးလိုက်သည်..။ ခင်မောင်လွင်၏ တရစပ် ဆောင့်ချက်တွေက ခုတင်ကြီး တစ်ခုလုံး တကျွိကျွိ မြည်နေသည်..။ “လုပ်….လုပ်..ကို ……ရီလေး ပြီးတော့မယ်…..မြန်မြန်လေး…ဆောင့်…အား….အ….အင်း…..“ အားသွန်၍ ဆောင့်လိုးလိုက်သော ခင်မောင်လွင်မှာ လီးကို စောက်ခေါင်းထဲ တဆုံးထိုးနှစ် စိုက်သွင်းလိုက်ပြီး သုတ်ရေများကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည်..။
ခင်မောင်လွင်က ခဏအကြာ ခင်နွဲ့ရီ၏ကိုယ်ပေါ်မှ ဆင်းပြီး ပက်လက်လှန်ချလိုက်တော့ ခင်နွဲ့ရီက ထထိုင်ပြီး ခင်မောင်လွင်ကို ပုဆိုး ပြန်စွပ်ပေးလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ သူမ ခါးထိလှန်ထားသော ထဘီလေးကို ပြန်ဆွဲချရင်း အိပ်ယာပေါ် ပြန်၍ လှဲချလိုက်သည်..။ လူတစ်ကိုယ်လုံး နွမ်းနယ်၍ နေသည်..။ ၁၀ မိနစ်လောက် ကြာတော့ ခင်မောင်လွင်ထံမှ ဟောက်သံက ထွက်လာသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ အိပ်ယာပေါ်မှ အသာအယာထ၍ ခုတင်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ ခုတင် ခြေရင်းဖက်သို့ လာကာ ထဘီဟောင်းတစ်ထည်ဖြင့် သူမ၏ ပေါင်ကြားတွင် ပေကျံနေသည်များကို သုတ်သည်..။
ထိုအခိုက်မှာပင် လမ်းဒေါင့်ဆီမှ ဂစ်တာတီးသံ ထွက်ပေါ်လာ၍ ခင်နွဲ့ရီ နားစွင့်မိလိုက်သည်.. ။ ဒီနေရာတွင် ဂစ်တာတီးသံ တစ်ခါမှ မကြားဖူးခဲ့ပါ..။ ဂစ်တာသံနောက်မှ သီချင်းသံက ထွက်ပေါ်လာသည်..။“ဟင်…ဒါ..ဒါ..ဇေယျာ့ အသံပဲ…ပတ်ဝန်းကျင်ကများ ….အို….ဒီနားမှာ အပျိုလေးတွေ အများကြီး ရှိတာပဲ….“ နားစွင့်နေရင်း လက်ထဲမှ ထဘီဖြင့် စောက်ဖုတ်ကို ဆက်၍ မသုတ်သေးပဲ အသာအုပ်ကိုင်ထားသည်..။
နားထောင်ရင်း နားထောင်ရင်းဖြင့် ဇေယျာ့ အသံမှန်းလဲ သိနေတော့ ခင်နွဲ့ရီ၏ စိတ်တွေက ကြွလာသည်..။ စောစောက ခင်မောင်လွင် လိုးသဖြင့် ပြီးချင်ချင် ဖြစ်နေသော စိတ်က နဲနဲ ငြိမ်နေရာမှ ဟုန်းခနဲ ထ၍ လာသည်..။ လက်ထဲမှ ထဘီလေးဖြင့် စောက်ပတ်ကို ဖိဖိပွတ်သည်..။ အရသာတွေ့လာတော့ မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ရင်း ဇေယျာ၏ အသံကို နားစွင့်သည်..။ မျက်လုံးထဲတွင်တော့ ညနေက မြင်ခဲ့ရသော ဇေယျာ့ လီးကြီးကို ပြန်မြင်ယောင်နေသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ သူမစိတ်ကို မထိန်းနိုင်တော့…။ မျက်လုံးဖွင့်၍ ခုတင်ပေါ် လှမ်းကြည့်လိုက်သည်.။ ခင်မောင်လွင်က မှန်မှန်ကြီး ဟောက်၍ အိပ်ပျော်နေသည်..။
လက်ထဲမှ ထဘီဟောင်းလေးကို ဘေးသို့ချလိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်ကို နောက်ပြန်ထောက်၍ ဖင်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ချလိုက်သည်..။ ပြီးမှ ပေါင်ကို ကားလိုက်ကာ မတရားဖောင်းတင်းလာသော စောက်ပတ်ကြီးကို လက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်၍ ပွတ်သည်..။ စောက်စေ့လေးကို လက်ညှိုးထိပ်ဖြင့် ကလိသည်..။ နားက ဇေယျာ ၏ အသံကို အဆက်မပြတ် နားစွင့် ရင်း မှိတ်ထားသော မျက်လုံးထဲမှာ ဇေယျာ့ လီးကြီးကို မြင်ယောင်ကာ လက်ညှိုးလက်ခလယ် ပူး၍ စောက်ခေါင်းထဲ ထိုးသွင်း၍ ထုတ်ချီသွင်းချီဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ထိုးသည်..။
“အင်း…ဟင်း…..ဇေယျာရယ်…..သား….ရယ်…..“ ခဏအတွင်း ခင်နွဲ့ရီတစ်ယောက် ပြီးချင်လာသည်..။ လက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း ခပ်သွက်သွက်လေး ထိုးထဲ့၍ လိုးသည်..။ “ဇေယျာ….မမ..ပြီး…တော့ မယ်….အ…..အ…အား….“ ခင်နွဲ့ရီတစ်ယောက် မျက်နှာတစ်ခုလုံး ရွုံ့မဲ့၍ ဖင်ကြီးဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ဖြစ်ကာ ပြီးသွားရတော့သည်..။ နောက်နေ့တွင် ခင်နွဲ့ရီသည် မနက်ပိုင်း ထဲက ဈေးသို့သွား၍ ညနေပိုင်းကျတော့ ပျံကျဈေးလေးကို မသွားတော့ပေ..။ ထို့ကြောင့် ဇေယျာနှင့် မတွေ့ရ..။ တွေ့ချင်သော စိတ်က အဆမတန် ရင်ထဲတွင် ဖြစ်နေပေမယ့် ဒီစိတ်ကို အတင်းမျိုသိပ် ချုပ်တည်းထားပြီး ခင်နွဲ့ရီသည် ဇေယျာကို ရှောင်နေခဲ့သည်..။ ည ၉ နာရီ ထိုးပြီ..။
သားနှင့် လင်ဖြစ်သူ ခင်မောင်လွင်တို့ အိပ်၍ သွားပြီ..။ ညနေက မသောက်တာကြာပြီဖြစ်သော ခင်မောင်လွင်ကို ခင်နွဲ့ရီကပင် စကားစ၍ အရက်သောက်ဖြစ်အောင် ဆွယ်ကာ အမြည်းကောင်းကောင်း လုပ်ပေးကာ အရက်တိုက်ခဲ့သည်..။ ခင်မောင်လွင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ တစ်ရေး မနိုးနိုင်တော့…။ ခင်နွဲ့ရီ တွက်ထားသည့်အတိုင်း ည ၉ နာရီ ကျော်လျင် ဂစ်တာသံနှင့် ဇေယျာ့ သီချင်းသံက ထွက်ပေါ်လာသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ အိပ်ယာပေါ်တွင် အသာလှဲ၍ ဇေယျာ၏ အသံကို နားစွင့်ရင်း ဖီးတက်နေမိသည်.။
ထဘီထဲ လက်ထည့်၍ စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်သည်..။ စောက်စေ့လေးကို လက်ညှိုးထိပ်လေးနဲ့ ကလိသည်..။ ခဏအတွင်း ခင်နွဲ့ရီ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးက မတရားဖောင်း၍ ခုံးထလာပြီး စောက်ရည်ကြည်လေးတွေက စိုရွဲ၍ လာသည်..။ဒီအခိုက်မှာပင် ဂစ်တာတီးပြီးသွားသော ဇေယျာက လှမ်း၍ အကြည့်ဖြင့် ဆုံသဖြင့် လက်ယပ်လှမ်းခေါ်လိုက်သည်…။ ခင်နွဲ့ရီတို့ အိမ်က ဒေါင့်အိမ် ..။ အိမ်ရှေ့တွင် က ပန်းစိုက်ရောင်းသောခြံရှိသည်..။ လူနေသည့်တဲက ဟိုတစ်ဖက်တွင် တော်တော်ဝေးသည်..။ ခြေရင်းဘက်က လမ်း ..။ လမ်းတစ်ဖက်က အိမ်ကလည်း ဝေးသည်..။ တဲသာသာ အိမ်လေး ဖြစ်၍ ခြံစည်းရိုးပင်တွေက တဲကိုပင် မမြင်ရ..။ ခေါင်းရင်းဘက်ကအိမ်က လူမနေ..။ အိမ်က ပျက်စီးနေပြီ..။ ဒီနေ့မီးပျက်သော ရက်..။ ခင်နွဲ့ရီ ညဦးထဲက ခြံစည်ရိုးတံခါးကို စေ့ထားသည်..။ ဇေယျာ ဂစ်တာကိုင်၍ ခြံစည်းရိုးတံခါးကို တွန်းဝင်လာသည်..။
ခင်နွဲ့ရီ အိမ်တံခါးကို ပြန်စေ့၍ အောက်သို့ ဆင်းလိုက်သည်.။ ဇေယျာက ခြံစည်းရိုးအတွင်းဖက်တွင် ဂစ်တာကို ထောင်ခဲ့ပြီး ခင်နွဲ့ရီဆီ လျှောက်လာသည်.။ နှစ်ယောက်သား ထိုင်ချလိုက်ပြီး..ထွေးနေအောင် ဖက်ကာ နမ်းကြသည်..။ ခင်နွဲ့ရီတို့ ခြံစည်းရိုးက လူတစ်ရပ်ကျော်လောက် ရှိသော ဝါးကပ်ခြံစည်းရိုး ဖြစ်သည်.။ ဒီနေ့တော့ ခင်နွဲ့ရီက ဇေယျာကို အတင်းကြုံး၍ ဖက်ထားမိသည်..။ ခင်နွဲ့ရီမှာ ညအိပ်ရန်ဝတ်ထားသော ရှပ်အင်္ကျီလက်တိုကို ရင်ဘတ် ကျယ်သီးတွေဖြုတ်ပေးလိုက်သည်..။ ကောင်လေးက ချက်ချင်းပင် မျက်နှာကို ထိုးအပ်ကာ နို့နှစ်လုံးကို ဆွဲစို့သည်..။
ခင်နွဲ့ရီ ရင်ဘတ်လေး ကော့၍ ကော့၍ ပေးပြီး နို့နှစ်လုံးကို ကလေးနို့တိုက်သလို လက်ဖြင့်မကိုင်ကာ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး အစို့ခံသည်..။ စောက်ရေတွေကလည်း တစိမ့်စိမ့် ယိုစီးကျနေပြီ.။ ခင်နွဲ့ရီ အိမ်ပေါ်သို့ တစ်ချက်နားစွင့်ကြည့်သည်.။ လင်ဖြစ်သူ ခင်မောင်လွင့် ဟောက်သံကသာ အဆက်မပြတ် ထွက်နေသည်..။ ဘေးဘီသို့ မျက်လုံး ကစားကြည့်သည်..။ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး မှောင်မဲ တိတ်ဆိတ်နေပြီး ဘာလွုပ်ရှားမွုမှ မတွေ့ရ…။ “အန်တီ့ကို သိပ်ချစ်တာပဲ…“ “တို့လဲ ချစ်တယ်… အင်း….မမလို့ခေါ်တော့နော်….ခုပဲ…တို့ကို မယားဖြစ်အောင် လုပ်တော့မှာမို့လား…. မမလဲ. .မောင်လေးလို့ခေါ်မယ်…သိလား….“ “အင်း……“ “ကဲ….လာ….“ ခင်နွဲ့ရီသည် ဇေယျာကို အိမ်ဘေးသို့ ခေါ်လာသည်..။
အိမ်ဘေး မြက်နုနုလေးများ ပေါက်နေသော နေရာရောက်တော့ …. “ဖင်ချပြီး ထိုင်လိုက်….“ “ခြေထောက်ဆင်း….ဟုတ်ပြီ….နောက်ကို တံတောင်ဆစ်ထောက်ပြီး ကိုယ်ကို နဲနဲ လှဲလိုက်…ရပြီ….မောင်လေး…..“ ခင်နွဲ့ရီ ဇေယျာ၏ ပုဆိုးခါးပုံစကို ဆွဲဖြုတ်ချလိုက်သည်..။ ဇေယျာ့ လီးကြီးက မတ်ခနဲ ထွက်၍လာသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ ဘေးတွင် ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်နေရာမှ ငုံ့၍ လီးကို လက်ဖဝါးလေးဖြင့် အသာကိုင်ကာ ငုံ့နမ်းသည်..။ ပြီးတော့ နီရဲရွမ်းစိုနေသော သူမနွုတ်ခမ်းလေးဖြင့် လီးဒစ်ကြီးကို ဖွဖွလေး စုပ်သည်..။ ဇေယျာ တွန့်ခနဲ တွန့်ခနဲ ဖြစ်နေသည်..။
ထို့နောက် လျှာကို တစ်လစ်လေး ထုတ်ကာ ယက်ရုံမျှ မက လုံးတစ်နေသော ဂွေးဥကြီးကိုပါ ငုံ့၍ နမ်းလိုက်ပြီး နွုတ်ခမ်းဖြင့် ငုံစုပ်လိုက် လျှာလေးဖြင့် ယက်ပေးလိုက် လုပ်နေသည်..။ ပြီးတော့ အမွေးလေးတွေ ခပ်ပါးပါး ပေါက်နေသော ဇေယျာ၏ ဆီးခုံကိုပါ လျှာဖြင့် ယက်သည်..။ လီးထိပ်တွင် စိမ့်ထွက်လာသော အရည်ကြည်လေးတွေက လီးတန်ကြီးပေါ်သို့ လိမ့်၍ ဆင်းလာသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ မမှီ မကမ်း ထိုအရည်ကြည်လေးတွေကို လိုက်၍ ယက်သည်..။
ခင်နွဲ့ရီ ပေါင်ခြံတစ်ခုလုံးလည်း စိုရွဲလို့ နေပြီ… “သိပ်ချစ်တာပဲ….မောင်ရယ်….လုပ်ရအောင်နော်….မမ…မနေနိုင်တော့ဘူး…..“ တုန်ခိုက်စွာ ငြီးသံလေးဖြင့် တစ်ချက်ပြောလိုက်ပြီး ဇေယျာ၏ မျက်နှာကို ကြည့်ကာ ပါးပြင်တစ်ဖက်ကို ရွတ်ခနဲ နမ်းသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ အံတစ်ချက်ကြိတ်ခါ သူမ၏ ထဘီလေးကို မ၍ ဇေယျာ့ပေါင်ခွဆုံပေါ်သို့ ခွ၍ တက်လိုက်သည်..။ လက်တစ်ဖက်က တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသော ဇေယျာ၏ လီးကြီးကို အသာထိမ်း၍ ဆုပ်ကိုင်ကာ စိုရွဲနေသော သူမစောက်ပတ်ဝတွင် တေ့ကာ စောက်စေ့ထိပ်ကို လီးဒစ်ကြီးဖြင့် ပွတ်လိုက်ပြီးမှ အထဲသို့ဝင်အောင် ဖိချသွင်းယူလိုက်သည်..။
အားရကျေနပ်သွားသော ပီတိအဟုန်က ခင်နွဲ့ရီ တစ်ကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့၍ သွားသည်..။ ဇေယျာ၏ ဆီးခုံနှင့် သူမ၏ စောက်ပတ်ဝတို့ဖိကပ်၍ လီးတစ်ချောင်းလုံးကို စောက်ပတ်ထဲ သွင်းထားပြီး ဖင်ကို နှဲ့ကာ လှည့်ပေးသည်..။ “မမရယ်….ဟင်း…ဟင်း….“ ခင်နွဲ့ရီ ဖင်ကိုကြွပြီး တစ်ချက်ချင်း လိုးသည်..။ ခင်နွဲ့ရီ၏ စောက်ခေါင်းထဲတွင် အရည်တွေက မတရား ထွက်နေသဖြင့် တဘွတ်ဘွတ် အသံတွေက ထွက်ပေါ်၍ နေသည်..။ ဇေယျာက လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ခင်နွဲ့ရီ၏ နို့နှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ကိုင်သည်..။ ဖြစ်ညှစ်သည်..။
ရမ္မက်ထန်သော မျက်လုံးအစုံဖြင့် ဇေယျာ၏ မျက်နှာချောချောလေးကို ကြည့်ကာ အားပါးတရ ဆောင့်၍လိုးသည်..။ “မောင်ရယ်…..မောင်….ဟင်းဟင်း….အင်း…အောက်ကနေ ပင့်ပေး…..ပင့်ပေးပါလား…မောင်….အင်း……ဟင်း…..ကောင်းလိုက်တာ….ကွယ်…..“ ရမ္မက်တွေ ဆူဝေလာတော့ ခင်နွဲ့ရီ အားမရနိုင် ဖြစ်လာရသည်..။ ဇေယျာကလည်း အောက်က ပင့်တင်ကာ ဆောင့်ပေးသည်..။ လူပျိုပေမဲ့ ကြည့်ဖူးသော အခွေတွေက မနည်းတော့..။ စောက်ခေါင်းထဲတွင် လီးကချောင်သလို ဖြစ်နေပေမယ့် ခင်နွဲ့ရီ အတော်ပင် ကျေနပ်အားရဖြစ်နေမိသည်..။ မကြာမီ ခင်နွဲ့ရီ တစ်ကိုယ်လုံး ဆိမ့်တက်လာသည်..။
“ကျောချပြီး လှဲလိုက်….“ ဇေယျာထောက်ထားသော တံတောင်ဆစ်ကိုဖြုတ်၍ ကျောကို ချလိုက်တော့ ခင်နွဲ့ရီက ဆောင့်ကြောင့်အနေအထားမှ ဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး ဇေယျာ၏ အပေါ်သို့ မှောက်ချကာ ဖက်လိုက်ပြီး ဖင်ကြွ၍ ဆောင့်သည်..။ ဇေယျာကလည်း မတတ်တတတ်နှင့် အောက်မှ ပင့်ဆောင့်ပေးသည်..။“အား…..မောင်…..မောင်ရယ်….မမ…အား…..ပြီး ပြီ….အား…….` “အ…မမ….အင်း…….“ နှစ်ယောက်စလုံး ပြိုင်တူပြီးကာ အရည်များ အိုင်ထွန်းသွားသည်..။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လွတ်ထွက်သွားမှာ စိုးသည့်အလား အတင်းဖက်၍ အငမ်းမရ နမ်းလိုက်ကြပါတော့သည်..။
ခင်နွဲ့ရီနှင့် ဇေယျာတို့ ညစဉ် ပုံစံမျိုးစုံ နှင့် တွေ့ခဲ့ လိုးခဲ့ကြသည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ…။ အရက်ကို ကြိုက်သော်လည်း မိန်းမက တားသဖြင့် မသောက်ပဲ နေခဲ့ရသော ခင်မောင်လွင်မှာလည်း မိန်းမက လိုလိုလားလား ရှိသဖြင့် နေ့စဉ် သောက်ခဲ့သည်မှာ မျက်နှာပင် အမ်းတမ်းတမ်း ဖြစ်နေချေပြီ..။ ပြူတင်းပေါက် ကို မျက်နှာပေး၍ ရပ်နေသော ခင်နွဲ့ရီ၏ နောက်သို့ ခင်မောင်လွင် က တိုးကပ်လိုက်ပြီး သူမ၏ တင်သားအစုံကို လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်လိုက်သည်..။
“ရီလေး တော်တော်လေး ကျသွားတယ်နော်… နေရော ကောင်းရဲ့လား….“ “ကောင်းပါတယ်…ကိုရဲ့…ရီလေး အသက်လဲ ပြန်ကြည့်အုံးလေ…၊ ၃၅ ထဲ ရောက်နေပြီ…ပြီးတော့ အိမ်ထောင်ကျတာလဲ ၁၃ နှစ်ထဲ ရောက်နေပြီဟာ….“ “အင်း……..“ “ပြီးတော့ ရီလေးက ဟိုကိစ္စကို သိပ်ပြီး စိတ်မသန်လို့ ဒီလောက် တင်နေတာ…ဟုတ်ဖူးလား….ကိုရဲ့….“ ဟုတ်ဖူးလား ဟု ပြီတီတီလေး လှည့်ပြောလိုက်သော ခင်နွဲ့ရီ၏ ပါးလေး တစ်ဖက်အား ခင်မောင်လွင်က ရွတ်ခနဲ နေအောင် နမ်းလိုက်ပါတော့သည်..။ ပြီးပါပြီ….။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မမလှလှ ခပျရှရှ